အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကလိင်ဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေခြင်းလော။ လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2016) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ပြုမူနေသိပ္ပံ (ဘေဆယ်)။ 2016 စက်တင်ဘာ;6(3): 17 ။
2016 သြဂုတ်5အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3390 / bs6030017
ဘရိုင်ယန် Y. ပန်းခြံ,1 ဂယ်ရီ Wilson က,2 ယောနသန်သည် Berger,3 မဿဲ Christman,3 Bryn Reina,4 ဖရန့်ဆရာတော်,5 Warren P. Klam,4 နှင့် အင်ဒရူး P. Doan4,5,*
တစ်ချိန်ကအမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုရှင်းပြခဲ့သည့်ရိုးရာအကြောင်းအချက်များသည် Erectile dysfunction မြင့်တက်လာခြင်း၊ သန္ဓေတည်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်း၊ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၌လိင်ဆက်ဆံစဉ်လိင်စိတ်နိုးထစဉ်ကာလအတွင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းမှလျော့ကျသွားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက် (၁) သည် domains များမှအချက်အလက်များကိုစဉ်းစားသည်။ , လက်တွေ့, ဇီဝဗေဒ (စွဲ / urology), စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်), လူမှုဗေဒ; နှင့် (40) ဤဖြစ်ရပ်၏အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေ ဦး တည်ချက်အဆိုပြုထား၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူအားလုံးအစီရင်ခံစာများ, စီးရီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဦး နှောက်၏စိတ်ခွန်အားနိုးစေသောစနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုအခြေခံသည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော etiology တစ်ခုအဖြစ်စူးစမ်းသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ (အကန့်အသတ်မရှိအသစ်အဆန်း၊ ပိုမိုပြင်းထန်သည့်ပစ္စည်းများကိုအလွယ်တကူသိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အလားအလာ၊ ဗီဒီယိုပုံစံစသည်တို့) သည်အမှန်တကယ်သို့အလွယ်တကူမကူးပြောင်းနိုင်သောအင်တာနက်အပြာစာပေများအသုံးပြုမှုကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွစေရန်လုံလောက်သောအစွမ်းထက်နိုင်သည် လိုချင်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းနှင့်နှိုးဆွမှုလျော့ကျခြင်းများကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုနိုင်သော၊ လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံအပျက်သဘောဆောင်သောဆိုးကျိုးများကိုပယ်ဖျက်ရန်လုံလောက်ပြီး၊ ဘာသာရပ်များမှအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပေးသောဘာသာရပ်များကို အသုံးပြု၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ ထိုအတောအတွင်းညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုခံစားနေရသောလူနာများကိုအကဲဖြတ်ရန်ရိုးရှင်းသောရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ protocol ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
keywords: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်, ညစ်ညမ်း, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း, PIED
1.1 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်-အဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အထိ, ED ၏နှုန်းထားများ [40 အောက်မှာလိင်တက်ကြွယောက်ျားအတွက်အနိမ့်ခဲ့ကြသည်, ထို့နောက်သည်အထိ steeply မြင့်တက်စတင်မပြုခဲ့1,2] ။ တစ်ဦးက 1999 အဓိက Cross-Section လေ့လာမှု [5 မှ erectile 5% အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်တက်ကြွယောက်ျား၏ 18% အတွက်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အသက်အရွယ် 59 အစီရင်ခံတင်ပြ3] နှင့် erectile-ကမောက်ကမဖြစ်မှုလေ့လာမှုများတစ် 2002 Meta-analysis သည် [(ရှေ့လေ့လာမှု မှလွဲ. )2အောက်မှာလူ 40% ၏တသမတ်တည်းနှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြ2] ။ ဤရွေ့ကားဒေတာအင်တာနက်ကမတိုင်မီစုဝေးကြ၏ "porn ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ" လိုအပ်မျှဒေါင်းလုပ်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကျယ်ပြန့်သုံးစွဲနိုင် enabled ။ ဤ "ပြွန်က်ဘ်ဆိုက်များ" ၏ပထမဦးဆုံး [စက်တင်ဘာလ 2006 ၌ထငျရှား4].
ပညာရေးနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒစာရွက်စာတမ်းအပေါ်မတူဘဲ, မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ 40 အောက်မှာအမျိုးသားများတွင်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်မဖြစ်၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့ချွန်ထက်တိုး။ ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသရုပ်ပြ ED မှပြောပြတယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်အပြုအမူ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေ့လာမှု (GSSAB) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်. တူညီသော (Yes / No) မေးခှနျးကိုသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်အားလုံးသောအလွန်ကြီးမားနမူနာ, နှိုင်းယှဉ်။ 2001-2002 မှာ, [13,618 နိုင်ငံများတွင်လိင်တက်ကြွယောက်ျား 29 မှအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်5] ။ တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်အကြာတွင် 2011 ထဲမှာ, GSSAB ထံမှတူညီသော (Yes / No) ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို [ခရိုအေးရှား, နော်ဝေနဲ့ပေါ်တူဂီအတွက်တက်ကြွစွာယောက်ျားလိင် 2737 မှအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်6] ။ ပထမဦးဆုံးအုပ်စု 2001-2002 အတွက် 40-80 အသက်ခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအုပ်စု 2011 အတွက် 40 နှင့်အောက်မှာရှိကြ၏။ အစောပိုင်းကကိုးကားသမိုင်းလေ့လာချက်များ၏တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, အသက်ကြီးလူပျို၏မှုမရှိခြင်းကိုနှုန်းထားများထက်ဝေးပိုမိုမြင့်မား ED နှုန်းထားများရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟု [2,7] ။ သို့သျောလညျးပဲဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွက်အမှုအရာအခြေခံကျကျပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်ကြီး 2001-2002 များအတွက် 40-80 နှုန်းထားများ [ဥရောပ၌အကြောင်းကို 13% ခဲ့ကြသည်5] ။ 2011 လူငယ်ဥရောပတိုက်သားအတွက် ED နှုန်းထားများ, 18-40 အသုံးပြုပုံ [14% ကနေ -28% အရွယ်ရှိ6].
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း, အကဲဖြတ်တူရိယာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု. သုတေသနငယ်ရွယ်လူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်မကြုံစဖူးတိုး၏နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ 2012 မှာတော့ဆွစ်ဇာလန်သုတေသီများ [Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF-30) ကို အသုံးပြု. 18-24 အသက်ဆွစ်ဇာလန်ယောက်ျား၏ cross-section မှာ 5% ၏ ED နှုန်းထားများတွေ့ရှိခဲ့8] ။ တစ်ဦးက 2013 အီတလီလေ့လာမှုအသစ်အစတင်ခြင်း ED များအတွက်အကူအညီရှာကြံလေးလူနာတဦးတည်း 40 [ကျော်အမျိုးသားများတွင်ထက်နီးပါး 10% ပိုမိုမြင့်မားပြင်းထန် ED ၏နှုန်းထားများနှင့်အတူ, 40 ထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြသည်အစီရင်ခံတင်ပြ9] ။ ကနေဒါဆယ်ကျော်သက်အပေါ်တစ်ဦးက 2014 လေ့လာမှု [53.5-16 အသက်ယောက်ျား၏ 21% ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပြလက္ခဏာတွေရှိခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်10] ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (26%), နဲ့အော်ဂဇင် (24%) နှင့်အတူပြဿနာများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အသုံးအများဆုံး (11%) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရလဒ် [ "သက်ကြီးစာပေအတွက်ဘုံဖြစ်သကဲ့သို့ဒါဟာကျနော်တို့ခြုံငုံထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားတဲ့နှုန်းကိုတွေ့အဘယ်ကြောင့်မရှင်းလင်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများအကြားမြင့်မားတဲ့နှုန်းထက်အမျိုးသမီးပါဝင်သူတစ်ဦးတည်း" အံ့သြစရာအားဖြင့်စာရေးသူကိုယူ10] (p.638) ။ ဒီတူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုက 2016 လေ့လာမှုတစ်ဦးနှစ်နှစ်ကာလအတွင်းငါးလှိုင်းတံပိုးအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (16-21 နှစ်) အကဲဖြတ်။ အထီးအဘို့, (အနည်းဆုံးလှိုင်း၌) မြဲပြဿနာများကိုအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (47.9%), အနိမ့်အလိုဆန္ဒ (46.2%), နဲ့ erectile function ကိုအတွက်ပြဿနာများ (45.3%) ရှိကြ၏။ အဆိုပါသုတေသီများ [အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏နှုန်းထားများအမျိုးသမီးအဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်အထီးအဘို့ငြင်းဆန်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု11] ။ တက်ကြွတာဝန်စစ်မှုထမ်းအတွက် ED သစ် diagnoses တစ် 2014 လေ့လာမှု [နှုန်းထားများထက်ပိုမို 2004 နှင့် 2013 အကြားနှစ်ဆခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်12] ။ အမျိုးအစားမခွဲခြားထားသော ED ၏နှုန်းထားများအတော်လေးတည်ငြိမ်ကျန်ရစ်စဉ် psychogenic ED ၏နှုန်းထားများ [အော်ဂဲနစ် ED ထက်ပိုတိုးလာ12] ။ ငါးကို item IIEF-2014 အလုပ်သမားတစ်ဦးက 21 Cross-Section တက်ကြွတာဝန်၏လေ့လာမှုအတော်လေးကျန်းမာ, အထီးစစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအသက် 40-5 33.2% တစ်ခုခြုံငုံ ED နှုန်းကိုတွေ့ရှိခဲ့  posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါမရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် 15.7% သကဲ့သို့မြင့်မားသောနှုန်းနှင့်အတူ  ။ အဆိုပါသုတေသီများလည်း [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ရဲ့သားကောင်နှင့်ဆက်စပ်သောဘက်လိုက်မှု underreporting မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြု14] နှင့် ED နှင့်အတူသူတို့၏အမျိုးအသာ 1.64% ကိုစစ်တပ်မှတစ်ဆင့် phosphodiesterase-5 inhibitors ဘို့ဆေးညွှန်းရှာသောအခါခဲ့ကွောငျး  ။ စစ်တပ်က Cross-Section အချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကစက္ကန့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတိုးမြှင့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာပြဿနာများ [ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု" နှင့် "အထီးလိင်အင်္ဂါ Self-image ကို" နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ထင်ရှား14] ။ တစ်ဦးက 2015 "အကျဉ်းဆက်သွယ်ရေး" 31% သကဲ့သို့မြင့်မားသောလိင်တက်ကြွယောက်ျားနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှုန်းထားများအတွက် 37% သကဲ့သို့မြင့်မားသောပညာရေးနှုန်းထားများအစီရင်ခံ  ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယောက်ျားအပေါ်အခြား 2015 လေ့လာမှု (အသက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 36 ဆိုလို), အဘယ်သူသည်မကြာခဏ "ကိုအသုံးပြုခြင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပူးပေါင်းလိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒဖြင့်လိုက်ပါသွား ED ယခုသူတို့ရဲ့အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အကူအညီရှာကြံလူတို့တွင်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်တစ်ခုဘုံလေ့လာရေးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် ".
အစဉ်အလာ, ED [အနေနဲ့အသက်အရွယ်-မှီခိုပြဿနာအဖြစ်ရှုမြင်ထားသည်2] နှင့် 40 အောက်မှာလူ ED အန္တရာယ်အချက်များအားစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုများမကြာခဏလေ့ထိုကဲ့သို့သောဆေးလိပ်သောက်, အရက်, အဝလွန်ခြင်း, အထိုင်များအသက်, ဆီးချို, သွေးတိုး, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ, နှင့် hyperlipidemia အဖြစ်အသက်ကြီးအတွက် ED နှင့်ဆက်စပ်အချက်များဖော်ထုတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြ  ။ ED များသောအားဖြင့် psychogenic သို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်စေအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ အော်ဂဲနစ် ED ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ (ဥပမာ, အာရုံကြော, ဟော်မုန်း, ခန္ဓာဗေဒ, ဒါမှမဟုတ် pharmacologic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး) မှစွပ်စွဲထားပြီးစဉ် Psychogenic ED စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ (ဥပမာ, စိတ်ကျရောဂါ, စိတ်ဖိစီးမှု, ယေဘုယျစိုးရိမ်သောက, ဒါမှမဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်) နှင့်ဆက်စပ်သောထားပြီး  ။ 40 အောက်တွင်လူတို့သညျအဘို့အအသုံးအများဆုံးရောဂါ psychogenic ED ဖြစ်ပြီး, သုတေသီများ [အမှုများကိုသာ 15% -20% မူလအစအတွက်အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်း18].
သို့သော် psychogenic ED ဘို့အကြံပြုအကျွမ်းတဝင်ဆက်စပ်အချက်များအဘယ်သူအားမျှနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်လျင်မြန်စွာအများအပြား-ခြံတိုးဘို့အကောင့်မှလုံလောက်သောပုံရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သုတေသီများမြင့်တက်နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများထိုကဲ့သို့သောအဝလွန်ခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်အဖြစ်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့လူနေမှု, (အချက်များသမိုင်းကြောင်းအအော်ဂဲနစ် ED ဆက်နွယ်နေကြောင်း) ၏ရလဒ်ဖြစ်ရပါမည်ကြောင်း hypothesize ။ သို့သျောလညျးထိုအလူနေမှုပုံစံစတဲ့အန္တရာယ်များကိုအချိုးကျပြောင်းလဲသွားတယ်ကြပြီမဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်ယုတ်လျော့ပါပြီ, နောက်ဆုံး 20 နှစ်များတွင်: 20-40 အသက်အမေရိကန်အမျိုးသားများတွင်အဝလွန်ခြင်းနှုန်းထားများ [4 နှင့် 1999 အကြားသာ 2008% တိုးလာ19]; အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအသက် 12 သို့မဟုတ်အထက်အကြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏နှုန်းထားများ [ပြီးခဲ့သည့် 15 နှစ်အတွင်းအတော်လေးတည်ငြိမ်ပါပြီ20]; နှင့်အမေရိကန်လူကြီးများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်နှုန်း [25 အတွက်% 1993 မှ 19 အတွက် 2011% မှငြင်းဆိုခဲ့သည်21] ။ အခွားသောစာရေးဆရာများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များတင်ပြသည်။ သို့သျောလညျး, ဘယ်လိုဖွယ်ရှိကြောင့်နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်မှုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါအကောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြားရှုပ်ထွေးကြားဆက်ဆံရေးပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သနည်း အခြားသူများကိုတိုးချဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသတင်းပို့စဉ်တချို့ကစိတ်ဓာတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်လူနာ [လိင်အဘို့လျော့နည်းဆန္ဒသတင်းပို့22,23,24,25] ။ မသာစိတ်ကျရောဂါနှင့် ED ဖွယ်ရှိ bidirectional နှင့် Co-ဖြစ်ပေါ်အကြားဆက်ဆံရေးသည်လည်း [အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်26] ။ ထိုသို့သောစိတ်ဖိစီးမှု, စိတျပူပဆက်ဆံရေးနှင့်မလုံလောက်သောလိင်ပညာရေးအဖြစ်နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်လာဘို့အကောင့်မှတွေးဆသည်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ၏နှုန်းထားများတွက်ချက်ရန်ခက်ခဲသည်စဉ်တွင်ဤအချက်များ (1) bidirectional မဟုတ်ယူဆပါတယ်ဖို့ဘယ်လိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါသည် နှင့် (2) ဤသို့သောအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အခက်အခဲ orgasming နှင့်ပညာရေးအဖြစ်နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအတွက်လျင်မြန်စွာ multi-ခြံတိုး, ရှင်းပြဖို့လုံလောက်သောနှုန်းထားများမှာအမှိုပြီလော
၁.၂ ။ ယနေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်အချက်တစ်ချက်ကိုအသုံးပြုပါသလား။
Kinsey Institute မှသုတေသီတွေက [2007 ထဲမှာ, ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် erectile-ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) အစီရင်ခံရန်ပထမဦးဆုံးနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်သညျ့အနိမ့်လိင်စိတ်တို့27] ။ ဗီဒီယိုကိုညစ်ညမ်း "ခပ်သိမ်းကိုသိပါသည်" ရှိရာအရက်ဆိုင်များနှင့် bathhouse ကနေစုဆောင်းဘာသာရပ်များ၏တစ်ဝက်,, ဗွီဒီယိုညစ်ညမ်းတုံ့ပြန်အတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များမှပြောနေတာခုနှစ်, သုတေသီများညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများမြင့်မားသောထိတွေ့မှုပုံအောက်ပိုင်း Response နှင့်ပိုပြီး, အစွန်းရောက်အထူးပြုသို့မဟုတ်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ "kinky" ပစ္စည်းတစ်ခုတိုးလာလိုအပ်နေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါသုတေသီများအမှန်တကယ်ပိုပြီးမတူညီကလစ်များပါဝင်သည်နှင့်အချို့သော Self-Selection ကိုခွင့်ပြုပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုဒီဇိုင်း။ သင်တန်းသားများကို '' လိင်အင်္ဂါ၏လေးပုံတပုံပါသေးပုံမှန်အားကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး .
ထိုအချိန်မှစ. သက်သေအထောက်အထားများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နှုန်းထားများအတွက်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်အတွက်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ နီးပါးခြောက်လသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သူထင်ရှားတဲ့ "MedHelp.org ED ဖိုရမ်" အပေါ်အကူအညီနဲ့ရှာကြံ 10 3962 ၏ဧည့်သည်များထဲက 25 ထက်အသက်ငယ်ခဲ့ကြသည်။ ပို့စ်များနှင့်မှတ်ချက်များ၏ရှစ်နှစ်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများတွင်လေ့ ED (Non-အော်ဂဲနစ် ED) ၏စိတ်ကျန်းမာရေးရှုထောင့်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေစကားများအကြား, "porn" [ဝေးနေဖြင့်အများဆုံးမကြာခဏညျထငျရှား28] ။ အထက်တန်းကျကွီးရှယျအိုမြားအပေါ်တစ်ဦးက 2015 လေ့လာမှု [အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကြိမ်နှုန်းနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့29] ။ တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစားသုံးသူမြား၏, 16% (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်းစားသုံးသူများအတွက်နှင့် 0%) Non-စားသုံးသူအတွက် 6% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကဖော်ပြခဲ့သည်။ ( "ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်မကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ") masturbated သူကို hypersexuality များအတွက်ကုသမှုတစ်ပတ်ကိုခုနစ်ခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီရှာကြံယောက်ျား၏နောက်ထပ် 2015 လေ့လာမှု (ပျှမ်းမျှအသက် 41.5), [71% အခက်အခဲ orgasming သတင်းပို့အတူ 33% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ30] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက်အဖြစ်ညစ်ညမ်းအပေါ်ထပ်မံမှီခိုလှုံ့ဆျောနိုငျသညျ။ တစ်ဦး 2014 အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုများတွင်အဘယ်သူ၏ဦးနှောက်စွဲ၏သက်သေအထောက်အထားများအဘို့အစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေခဲ့ 11 compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (ပျမ်းမျှအသက် 19) ၏ 25, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့ "ကြုံတွေ့ဖူးကြောင်းအစီရင်ခံ မိန်းမနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အထူးလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကိုလျော့ (မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆက်ဆံရေးအတွက်ပေမယ့်) " ။ Clinician လည်း PIED အပါအဝင်ညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, ဖော်ပြထားပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, သူ့စာအုပ်ထဲတွင် The New အဝတ်အချည်းစည်း, urology ပါမောက္ခဟယ်ရီ Fisch [အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုကသူ့လူနာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုချို့ယွင်းနေသောသတင်းပေးပို့32] နှင့်-Norman Doidge သည်သူ၏စာအုပ်ထဲတွင်ဖော်ပြခဲ့သည် Psychiatry ပါမောက္ခ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက် အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်ဖယ်ရှားရေး [မိမိလူနာအတွက်ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နိုးထပြဿနာများပြောင်းပြန်33] ။ 2014 ခုနှစ်, Bronner နှင့်ဘင်-ဇိအုန်တောင်ပေါ်ကသူ၏အရသာအစွန်းရောက်အမာခံညစ်ညမ်းမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်ခဲ့သောတစ်ဦး compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူပူးပေါင်းလိင်ကာလအတွင်းအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအတွက်အကူအညီရှာသောသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ [ရှစ်လညစ်ညမ်းအားလုံးကိုထိတွေ့မှုရပ်တန့်ပြီးနောက်လူနာအောင်မြင်သောအော်ဂဇင်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ကြုံနေရအစီရင်ခံ, ကောင်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးခံစားအတွက်အောင်မြင်ခဲ့34] ။ ယနေ့အထိမျှသည်အခြားသုတေသီများကသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများမှပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ရန်အတွက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူယောက်ျားဟုမေးကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေ့လာမှုများအရှိဆုံး illuminating ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, စာပေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ် [arousal, ဆွဲငင်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းပြီလေ့လာမှုအတော်များများတွေ့27,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43] အခက်အခဲ orgasming, လျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကိုအပါအဝင် [27,30,31,35,43,44] ပူးပေါင်းလိင်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ , [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီး၏ခံစားလျော့နည်းသွား37,41,45] လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု [38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47] တနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံကျော် arousal အောင်မြင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးများအတွက်ဦးစားပေး  နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလိင်များအတွက်လျော့နည်းဆန္ဒသတင်းပို့ရှိသူများအတွက်ညစ်ညမ်းတုံ့ပြန် သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်ကို Activation  ။ အထက်တန်းကျကွီးရှယျအိုမြားအတွက်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်းနောက်တဖန်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအကြိမ်ရေ  ။ နှစျခု 2016 လေ့လာမှုများကဒီမှာအသေးစိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရထိုက်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု longitudinal ဒေတာတွေနဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်အိမ်ထောင်သည်ပေါ်ပထမဦးဆုံးတစ်နိုင်ငံလုံး-ကိုယ်စားလှယ်လေ့လာမှုဖြစ်ဖို့ပြောဆိုထားသည်။ ဒါဟာ Wave ကို 1 (2006) မှာမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အဆိုး Wave ကို2(2012) မှာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝနှင့်အတူသင်တန်းသားများကို '' အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူ related ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အများဆုံးအပျက်သဘောထိခိုက်အဆိုပါလက်ထပ်ထိမ်းမြားအမြင့်ဆုံးကြိမ်နှုန်း (တစ်ချိန်ကတစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) မှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခဲ့ကြသောလူတို့၏ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ မျိုးစုံ variable တွေကိုအကဲဖြတ်, 2006 အတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်း [2012 ဆင်းရဲသားအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကို၏ဒုတိယအပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းခဲ့သည်47] ။ ဒုတိယလေ့လာမှုကိုတိုက်ရိုက်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့် OSAs (အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ) တွင်ပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုဖြစ်ဖို့ပြောဆိုထားသည်။ 434 ယောက်ျား၏ဤစစ်တမ်းအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အောက်ပိုင်း erectile function ကိုပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြကြောင်းအစီရင်ခံ  ။ ထို့အပြင်လူတို့၏ 20.3% ဟာသူတို့ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်တဦးတည်းရည်ရွယ်ချက်က [ "ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့" ကပြောသည်44] ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတင်းမာမှုညွှန်ပြစေခြင်းငှါတစ်ဦးတွေ့ရှိချက်များတွင် 49% တစ်ခါတစ်ရံ "သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရှာဖွေနေသို့မဟုတ်သူတို့ကိုယခင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်ကြကြောင်း OSAs တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရသို့မဟုတ်" ဖော်ပြထား  (p.260) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြဿနာအဖြစ် OSAs ၏သင်တန်းသားများကို (27.6%) Self-အကဲဖြတ်သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုသိသိသာသာရာခိုင်နှုန်း။ ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ဤနှုန်းမှာမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်နေစဉ်, ပြီးခဲ့သည့်ခြောက်လအတွက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သူ 2016 ယောက်ျားအပေါ်အခြား 1298 လေ့လာမှု [သင်တန်းသားများ၏ 28% hypersexuality ရောဂါများအတွက် cutoff မှာသို့မဟုတ်အထက်သွင်းယူကြောင်းအစီရင်ခံ49].
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်လည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလူပျိုတို့ထလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများမသက်ဆိုင်သောကြောင်းဟုဆိုကာနှစ်ခု 2015 စာတမ်းများလည်းပါဝင်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများသည်ဤစာတမ်းများ၏ပိုမိုနီးကပ်စွာစာမေးပွဲနှင့်ဆက်စပ်တရားဝင်ဝေဖန်မှုများအပေါ်အချိန်မတန်မီဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအစက္ကူ [နုပျို ED လိင်အေးစက်၏အလားအလာအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. အသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပါရှိသည်50] ။ သို့သော်ဤစာအုပျအမျိုးမျိုးသောကှာဟ, ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အတိုင်းအတာများအားနည်းချက်တွေကိုအဘို့အဝေဖန်မှုအောက်မှာရောက်လေပြီ။ ဥပမာ, အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းအတွက် erectile function ကိုရလဒ်ကိုအတိုင်းအတာအဘို့အဘယ်သူမျှမစာရင်းအင်းရလဒ်များကိုပေးပါသည်။ သုတေသနသမားစက္ကူ၏တရားဝင်ဝေဖန်မှုထွက်ထောက်ပြအဖြစ်ထပ်မံသည်, စာတမ်းများ '' စာရေးဆရာ, "သူတို့ရဲ့ကောက်ချက်အပြစ်လွတ်စေကိုလေ့လာလူဦးရေဒါမှမဟုတ်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်. လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူစာဖတ်သူကိုပေးကြပြီမဟုတ်"  ။ ထို့အပြင်အဆိုပါသုတေသီများသည်လွန်ခဲ့သောလကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာနာရီစုံစမ်းစစ်ဆေး။ သို့သျောလညျးတစျယောကျတညျးကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနာရီကြာ၏ variable ကို "နေ့စဉ်အသက်တာ၌ပြဿနာများ", အ SAST-R ကို (စမ်းသပ်ပြလိင်စွဲလမ်း) တွင်ရမှတ်များ, နှင့် IATsex အပေါ်ရမှတ် (အနေနဲ့တူရိယာမှကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်တဲ့ကြောင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်လေ့လာမှုများတွေ့ပြီ ကြောင်း [) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှစွဲအကဲဖြတ်ထားပါသည်52,53,54,55,56] ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း (cue reactivity ကို), အားလုံးစှဲအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုထူထောင် Correlate ကြည့်နေစဉ်တစ်ဦးကပိုကောင်းခန့်မှန်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထ ratings ဖြစ်ပါတယ် [52,53,54] ။ အင်တာနက်ကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုစွဲလမ်းအပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းမထားဘူးကြောင်းတိုးပွားလာတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ [ "ရှယျခကျြ, အကျိုးဆက်များနှင့်အပြုအမူ၏ Contextual ဝိသေသလက္ခဏာများလည်းအကဲဖြတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလျှင်စွဲလမ်းမှုသာစနစ်တကျအကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်"57] ။ (အသုံးပြုမှုနာရီထက်အခြား) "hypersexuality" အတွက်အမျိုးမျိုးသောသတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုပြီးအခြားသုံးသုတေသနအဖွဲ့များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းရှိသည်ဟု [15,30,31] ။ အတူတူယူ, ဒီသုတေသနကြောင့်မဟုတ်ဘဲရိုးရိုး "အသုံးပြုမှုနာရီ" ထက်အကြံပြု, မျိုးစုံ variable တွေကိုညစ်ညမ်းစွဲ / hypersexuality ၏အကဲဖြတ်အတွက်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖွယ်ရှိလည်းအလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အကဲဖြတ်ပါ။
တစ်ဦးကစက္ကန့်စက္ကူနော်ဝေး, ပေါ်တူဂီများနှင့်ခရိုအေးရှားကနေလိင်တက်ကြွယောက်ျားအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ပညာရေးနှုန်းထားများအကြားအနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံ  ။ အသီးသီး 40% နှင့် 31% အဖြစ် ED နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှုန်းထားများအဖြစ်မြင့်မားသောတွေ့ရှိခဲ့အမှန်ပင်ယခင်စာရွက်သူများ, ယောက်ျား 37 နှင့်အောက်တွင် ED ၏မြင့်ပျံ့နှံ့အသိအမှတျပွုနှင့်မတူဘဲဤစာရေးဆရာများ။ ဆနျ့ကငျြ, စက္ကူရဲ့စာရေးဆရာတဦးအားဖြင့် 2004 ၌ပြစ်မှားမိ Pre-streaming ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုတေသန [ယောက်ျား 5.8-35 သာ 39% ၏ ED နှုန်းထားများအစီရင်ခံတင်ပြ58] ။ သို့သျောလညျး, တစ်ဦးစာရင်းအင်းနှိုင်းယှဉ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်စာရေးဆရာများကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနုပျို ED များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်မထင်ထားဘူးကြောင်းကောက်ချက်ချ။ ဒါကသူတို့စစ်တမ်းကောက်ယူပျေါတူဂီယောက်ျားနော်ဝေနှင့် Croatian နှင့်နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နိမ့်ဆုံးနှုန်းဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ပေါ်တူဂီသာ 40% ကိုနော်ဝေနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက "နေ့စဉ်ဖို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်ကနေ" အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသုံးပြီးအစီရင်ခံကြောင်းပေးထား, အလွန်အမင်းပြတ်သားပုံရသည် , 57% နှင့် Croatian, 59% ။ ဤစာတမ်းသည်တရားဝင် [အလုပ်မှာဖြစ်လူသိများသို့မဟုတ်တွေးဆ variable တွေကိုအကြားတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်နှစ်ဦးစလုံးဆက်ဆံရေးပတ်ဝိုင်းနိုင်ပြည့်စုံမော်ဒယ်များ employ ပျက်ကွက်မှုအတွက်ဝေဖန်ထားသည်59] ။ စကားမစပ်, ပေါ်တူဂီ, ခရိုအေးရှားနှင့်နော်ဝေကနေအတူတူစစ်တမ်းသင်တန်းသားများကိုအများအပြားပါဝင်သောပြဿနာအနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအပေါ်တစ်ဦးဆက်စပ်စာရွက်ထဲတွင်လူတို့သညျသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကသူတို့ပြဿနာမရှိခြင်းလှူဒါန်းခဲ့သည်ဟုယုံကြည်မြောက်မြားစွာအချက်တွေထဲကအရာဟုမေးခဲ့သည်။ သည်အခြားအကြောင်းရင်းများအနက်မှန်းခြေ 11% -22% [ "ငါသိပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်" နှင့် 16% -26% "ငါအရမ်းမကြာခဏ masturbate" ကို ရွေးချယ်. ရှေးခယျြခဲ့60].
2 ။ လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ
ဆက်စပ်လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူများမှာနေစဉ်, 40 အောက်မှာအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏မကြုံစဖူးမြင့်တက်အတွက်အလုပ်မှာတိကျတဲ့ variable တွေကိုသီးခြားအတွက်အခက်အခဲ (ဘာသာရပ်များတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားထားတဲ့အတွက်) ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေ့လာမှုများပိုကောင်းလည်းမရှိရှိမရှိတည်ထောင်ရန်မယ်လို့အကြံပြု ယင်း၏အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအကြားဆက်သွယ်မှု။ အောက်ပါလက်တွေ့အစီရင်ခံစာများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပပျောက်ရေးမှကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်မဟုတ်ရင် unexplained အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလူနာတောင်းဆိုနေတာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများအပေါ်သက်ရောက်မှုခွဲထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်ဘယ်လိုသရုပ်ပြပါ။ ကျနော်တို့သုံးတက်ကြွတာဝန်စစ်မှုထမ်းအပေါ်သတင်းပို့အောက်တွင်။ နှစ်ဦးကိုသူတို့ရဲ့ Non-အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအော်ဂဇင်ရရှိအတွက် unexplained အခက်အခဲများအတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုမြင်တော်မူ၏။ ပထမဦးဆုံးရှေ့အပိုဒ်စာရင်းဝင် variable တွေကို (1), (6) နှင့် (7), ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒုတိယဖော်ပြခဲ့တဲ့ (6) နှင့် (7) ။ နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ကျန်းမာရေး diagnoses ၏လွတ်ကြ၏။ ငါတို့သည်လည်းစိတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုငါမြင်၏သူတစ်ဦးကိုတတိယတက်ကြွတာဝန်စစ်မှုထမ်းသတင်းပို့ပါ။ သူက variable ကို (6) ဖော်ပြခဲ့တယ်။
2.1 ။ ပထမဦးစွာလက်တွေ့အစီရင်ခံစာ
တစ်ဦးက 20 နှစ်အရွယ်တက်ကြွတာဝန်ယခင်ခြောက်လလိင်ဆက်ဆံမှုစဉ်အတွင်းအော်ဂဇင်ရရှိအခက်အခဲများနှင့်အတူတင်ပြကော့ကေးဆပ်စစ်မှုထမ်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူကရေခြားမြေခြားတပ်ဖြန့်နေတုန်းဒါဟာပထမဦးဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးအော်ဂဇင်မပါဘဲတစ်နာရီခန့်အဘို့အ masturbating ခဲ့ပါတယ်, သူ၏လိင်တံ flaccid သွားလေ၏။ မိမိအအခက်အခဲများစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ရရှိသည်မိမိဖြန့်ကျက်လျှောက်လုံးဆက်ပြောသည်။ မိမိအပြန်လာကတည်းကသူသည်မိမိစေ့စပ်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်း ejaculate နိုင်ခဲ့ဘူး။ သူကတစ်ဦးစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်ပေမယ့်အော်ဂဇင်မရနိုင်နှင့် 10-15 MIN ပြီးနောက်သူကြိုတင်သည်သူ၏ရှိခြင်း ED ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှအမှုမဟုတ်ခဲ့တော်မူသောစိုက်ထူ, ဆုံးရှုံးမယ်လို့နိုင်ဘူး။ ဤသည်ကသူ၏စေ့စပ်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
လူနာနှစ်ပေါင်း၏အတိတ်စုံတွဲတို့အတွက်နီးပါးနေ့စဉ်တကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် "နှစ်ပေါင်း" အတွက်မကြာခဏ masturbating နှင့်ထောက်ခံ။ သူကဆွဘို့အအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုထောက်ခံ။ သူကမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် access ကိုရရှိခဲ့ချိန် မှစ. သူတစ်ခုတည်းကိုသာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအပေါ်မှီခို။ အစပိုင်းမှာအကြောင်းအရာသေချာပေါက်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှုပါဝင်ပါဘူးရှိရာ "အပျော့ porn" "ဟုအဆိုပါလှည့်ကွက်ခဲ့တယျ" ။ သို့သော်တဖြည်းဖြည်းသူအော်ဂဇင်ကိုပိုမိုဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် fetish ပစ္စည်းလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတစ်ပြိုင်နက်တည်းမျိုးစုံဗီဒီယိုများဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အများဆုံးလှုံ့ဆော်အစိတ်အပိုင်းများကိုစောင့်ကြည့်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကအကြောင်းကိုဖြန့်ကျက်ဘို့ပြင်ဆင်နေသောအခါသူဝေးပူးပေါင်းလိင်ကနေဖြစ်ခြင်းစိတ်ပူခဲ့သည်။ ဒီတော့သူက "အတုလိင်အင်္ဂါ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည့်လိင်ကစားစရာ, ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒီကိရိယာကိုစပိုင်းတွင်ဒီတော့သူကမိနစ်အတွင်းအော်ဂဇင်ရောက်ရှိကြောင်းလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူအမှုတိုးမြှင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူခဲ့သကဲ့သို့, သူ ejaculate မှမဟုတ်တော့နှင့်ကြာကြာလိုအပ်နှင့်နောက်ဆုံးမှာသူလုံး ​​orgasm နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ဖြန့်ကျက်ရာမှပြန်လာသောကတည်းကသူကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ကစားစရာနှစ်ဦးစလုံးသုံးပြီးတစ်နေ့လျှင်ဆက်လက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအဆကဖော်ပြခဲ့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းသည်သူ၏စေ့စပ်ရန်ဆွဲဆောင်ပေမယ့်သူကပိုပြီးလှုံ့ဆော်တွေ့ရှိခဲ့သောကွောငျ့, လူနာကသူအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံဖို့ device ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူကမဆိုအခြားကြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူသည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်အသက်မွေးမှုဖိအားငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူကအဲဒီမှာသည်သူ၏လိင်အင်္ဂါတစ်ခုခုမှားနေသည်နှင့်သူအလုပ်လုပ်သည်သူ၏စေ့စပ်နှင့်အတူသူ၏ဆကျဆံရေးလိုချင်စိုးရိမ်သောကြောင့်သူက "သက်ဆိုင်ရာ" အဖြစ်ကသူ၏ခံစားချက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမသည်သူမရှိတော့သူ့ထံသို့ဆွဲဆောင်ခဲ့စဉ်းစားရန်စတင်ခဲ့သည်။
ဆေးပညာအသူအဓိကနာမကျန်း, ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကျန်းမာရေး diagnoses မရှိသမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမဆိုဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်တာမခံခဲ့ရပါဘူး။ သူကဆေးရွက်ကြီးထုတ်ကုန်များ အသုံးပြု. ငြင်းဆိုပေမယ့်တစ်လတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ပါတီများမှာအနည်းငယ်ဖြည့်အချိုရည်သောက်၏။ သူကအရက်မူးယစ်ထံမှထွက်ဆိုတယ်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ သူကအတိတ်ကာလမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကသည်သူ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကတည်းကသည်သူ၏စေ့စပ်သည်သူ၏တစ်ဦးတည်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ခဲ့သညျ။ သူဟာလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများတစ်ဦးသမိုင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲတွင်သည်, မိမိအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာအားလုံးပုံမှန်ခဲ့ကြသည်, သူ၏လိင်အင်္ဂါစာမေးပွဲတွင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်ထုမပါဘဲပေါ်ထွန်းပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ခရီးစဉ်၏နိဂုံးမှာ, တကလိင်ကစားစရာအသုံးပြုမှုအလားအလာသည်သူ၏ penile အာရုံကြော desensitized နှင့်အမာခံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွသူ့ခုံပြောင်းလဲခဲ့သည်ကိုကြည့်ဖူးသောသူ၏ရှင်းပြခဲ့သည်။ သူကစားစရာသုံးပြီးနှင့်အမာခံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ဖို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ သူကနောက်ထပ်အကဲဖြတ်ဘို့ urology ရည်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်။ သူကလုံးဝရပ်တန့်နိုင်ဘူးဟုပြောသည်ပေမယ့်အချိန်ကိုအားဖြင့်သူသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာသူကသိသိသာသာကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်ခုတ်လှဲခဲ့ဆီးရောဂါပါရဂူများကရှုမြင်ကြသည်။ သူကစားစရာသုံးပြီးမပြောဘဲနေကြ၏။ သူကသူ့စေ့စပ်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံမှုမှတဆင့်နောက်တဖန် orgasm ရှိခြင်းခံခဲ့ရ, မိမိတို့ကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆီးရောဂါပါရဂူရဲ့အကဲဖြတ်ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
2.2 ။ ဒုတိယအချက်မှာလက်တွေ့အစီရင်ခံစာ
တစ်ဦးက 40 နှစ်အရွယ်အာဖရိကန်အမေရိကန်အခက်အခဲယခင်သုံးလစိုက်ထူရရှိအတူတင်ပြစဉ်ဆက်မပြတ်တက်ကြွတာဝန်၏ 17 နှစ်ပေါင်းနဲ့အတူစစ်မှုထမ်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူဟာသူ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရှိသည်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သောအခါ, ထိုအခက်အခဲတစ်ခုစိုက်ထူခြင်းနှင့်အခက်အခဲအော်ဂဇင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားသောကြောင့်ထိန်းသိမ်းရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အငယ်ဆုံးကလေးကခြောက်လအစောပိုင်းက, ကောလိပ်များအတွက် left အစဉ်အဆက်ကတည်းကသူဟာသူ့ကိုယ်သူပိုပြီးမကြာခဏတိုးလာ privacy ကိုကြောင့် masturbating တွေ့ရှိခဲ့လေသည်။ သူသည်ယခင်ကပျမ်းမျှသည်အခြားအပတ်က masturbated ဒါပေမယ့်တစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကြာကြာဒါဟာသူ့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းပစ္စည်းနှင့်အတူ orgasm ဖို့ကို ယူ. သူအမြဲအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပွုခဲ့ပေမယ့်ပိုပြီးမကြာခဏသူကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီပိုဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းသုံးပြီးသူ့အားဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲသူ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်သူ့ဇနီး "မအဖြစ်ဆွဲဆောင်မှု" ကိုတွေ့မီနှင့်အချိန်များတွင်အဖြစ် "မလှုံ့ဆော်ဖို့အဖြစ်" ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်အစဉ်အစောပိုင်းကသူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေး၏ခုနစ်နှစ်တွင်ဤကိစ္စများရှိခြင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ့ဇနီးကသူ adamantly ငြင်းပယ်သည့်ကိစ္စ, ရှိခြင်းခံခဲ့ရသံသယဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများရှိခြင်းခဲ့သည်။
နေ့စဉ် chlorthalidone ၏ 25mg မိမိဆေးဘက်ဆိုင်ရာသမိုင်းထက် ပို. နှစျနှစျအစောပိုငျးကသိလိုက်ရတယ်နှင့်ကောင်းစွာတစ် Diuretics ဆီးနှင့်အတူထိန်းချုပ်ထားခဲ့သောသွေးတိုး, အဘို့ကိုသာသိသာခဲ့ပါတယ်။ သူကမျှမကအခြားဆေးဝါးများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ယူခဲ့ပါတယ်။ မိမိအသာခွဲစိတ်မှုတစ်ခု appendectomy သုံးနှစ်ကကြိုတင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သူကမျှမလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများသို့မဟုတ်စိတ်ကျန်းမာရေး diagnoses ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတကျိပ်ကျော်နှစ်ပေါင်းတစ်ပတ်ကိုစီးကရက်သုံးထုပ်ဆေးလိပ်နှင့်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ဦးနှစ်ဦးကိုမှအချိုရည်သောက်သုံးထောက်ခံ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာမေးပွဲတွင်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ်ထုမပါဘဲသာမန်ပ္ပံအတွင်းအရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာ, သာမန်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစာမေးပွဲဖြေဆိုနှင့်ပုံမှန်ပေါ်ထွန်းလိင်အင်္ဂါဖော်ပြခဲ့တယ်။
စာမေးပွဲရဲ့အဆုံးမှာ, သူ့ကိစ္စများအမာခံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်မကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့ထိတွေ့မှုကနေမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခုံမှစွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ သူကအမာခံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းကိုလျော့ချဖို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ သုံးလအကြာတွင်လူနာသူအမာခံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရှောင်ရှားဖို့နဲ့လျော့နည်း masturbate ဖို့ "တကယ်ခက်" ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူက "ကိုယ့်ကြောင့်မလုပ်ဆောင်နိုင်" ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူဟာအိမ်မှာတယောက်တည်းအခါတိုင်းသူနောက်ဆုံးမှာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလို့အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, စောင့်ကြည့်သူ့ကိုယ်သူတွေ့ရှိရဟုဆိုသည်။ သူ့ကိုစိတ်တို လုပ်. သူ့ကိုသူအိမျတျောကိုစွန့်ခွာသူ၏ဇနီးမှရှေ့ဆက်ကြည့်ရှုရှိရာအမှတ်, ပို. ပင်လုပ်ချင်လုပ်သောသူက "အထဲကပျောက်ဆုံး" ခံခဲ့ရသည်ကဲ့သို့သူ့ကိုခံစားရလုပ်စောင့်ကြည့်ဘူး။ သူဟာလိင်အမူအကျင့်ကုထုံးတစ်ခုလွှဲပြောင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူကငြင်းဆိုခဲ့သည်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သူ၏အပြုအမူအပေါ်အလုပ်မလုပ်ဖို့ကြိုးစားချင်တယ်။
2.3 ။ တတိယလက်တွေ့အစီရင်ခံစာ
တစ်ဦးက 24 နှစ်အရွယ်အငယ်တန်းစစ်သားစုဆောင်းရေး Sailor သင်္ဘောသားအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းဖြင့်တစ်ဦးမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြိုးပမ်းမှုပြီးနောက်အတွင်းလူနာစိတ်ကျန်းမာရေးယူနစ်မှဝန်ခံခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ မိမိအအကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုစဉ်အတွင်းသူဟာလက္ခဏာဆေးဝါးများနဲ့ကုသခံရစဉ်အရက်ကိုမသုံးရန်အကြံပြုခဲ့သည်သော်လည်းအရက်သောက်အရက်မှဝန်ခံခဲ့သည်။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants ယူပြီးနေစဉ်သူ၏သမိုင်းနှင့်တိုးပွားလာသည်းခံစိတ်သည်သူ၏အသုံးပြုမှုကြောင့်အပျော့စားအရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorder နှင့်အတူတသမတ်တည်းရှိကြ၏။ သူ့သမိုင်း၏စှဲသောအဘို့ကို၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သူလောင်းကစားဝိုင်း, အင်တာနက်ဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲအကြောင်းမေးခဲ့ပါတယ်။ သူဟာအကြောင်းကိုခြောက်လအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအချိန် (5 + ဟက်တာနေ့က) ၏တစ်ဦးအလွန်အကျွံငွေပမာဏကိုဖြုန်း, ညစ်ညမ်းသူ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူလည်းသူကမျှမ erectile ကိစ္စများရှိခဲ့ဘယ်မှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်ပိုနှစ်သက်သူစဉ်ဆက်မပြတ်စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကသူ့နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ထင်ရှား, သူ့ဇနီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုလျော့ခဲ့သဘောပေါက်လာတယ်။ သူကညစ်ညမ်းမိမိအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသတိပြုမိဖြစ်လာခဲ့သည်သောအခါသူကသူမဆိုအတိုင်းအတာအထိပြုလုပ်ကြည့်ရှုအားပေးလျှင်သူသည်ကိုယ်ကိုပြန် overusing ရှာတွေ့မယ်လို့ကြောက်သည်သူ၏အင်တာဗျူးပြောနေ, လုံးဝကြောင့်ကြည့်ရှုတော့ဘူး။ သူဟာပြီးနောက်သူသည်မိမိအ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပျောက်ကွယ်သွားညစ်ညမ်းသုံးပြီးစဲကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ variable ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့် causation ထုတ်ဖေါ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေ့လာမှုများအများကြီး 40 အောက်မှာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက် unexplained လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများအဖြစ် Clinician Doidge ၏အောင်မြင်မှုများအားဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်  နှင့် Bronner နှင့်ဘင်-ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ [34အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဖယ်ရှားပစ်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ / စိတ်ကျေနပ်မှု] အထက်, ထိုကဲ့သို့သောသုတေသန, ဖြစ်နိုင်သမျှ PIED နှင့်အတူလေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုမေးပါလိမ့်မယ်အခက်အခဲမိတ်ဖက်နှင့်အတူအော်ဂဇင်ရရှိနှင့် / သို့မဟုတ်အနိမ့်။
3 ။ ဆွေးနွေးချက်
3.1 ။ အဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာအထီးလိင်တုံ့ပြန်မှု
အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုရှုပ်ထွေးပေမယ့်တော်တော်များများ key ကိုဦးနှောက်ဒေသများ [စိုက်ထူရရှိနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက်အရေးပါများမှာ61] ။ Hypothalamic အရေးပါ [ဦးနှောက်နှင့်အရံ input အတွက်ပေါင်းစည်းမှုစင်တာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိုက်ထူထိန်းညှိအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ62] ။ စိုက်ထူလွယ်ကူချောမွေ့သော hypothalamic အရေးပါသည့် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) [ပါဝင်သည်သော mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းကနေလိုလားသူ erectile input ကိုလက်ခံရရှိ62] ။ အဆိုပါ VTA-NAc circuit ကိုကြိုးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု key ကို detector ဖြစ်ပြီး, လေ့က "ဆုလာဘ်သည့်စနစ်" [ကိုခေါ်ဘက်ပေါင်းစုံဆားကစ်၏ကျယ်ပြန့်, ပိုမိုရှုပ်ထွေးထား၏အဓိကဖြစ်ပေါ်လာသော63] ။ ထိုကဲ့သို့သောလိင်သဘာဝဆုလာဘ်, မှတစ်ဦးချင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုအကြီးအကျယ် [အခြားအ limbic အဆောက်အဦထဲကနေ excitatory နှင့် inhibitory input ကိုလက်ခံရရှိသည့် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်း, နှင့် prefrontal cortex နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်64] ။ စိုက်ထူ [သည့် NAc အတွက် VTA နှင့် dopamine receptors အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ activation အပေါ်သို့မှီခိုနေကြ65,66] ။ အခြားအ limbic အဆောက်အဦများ (amygdala, hippocampus) နှင့် prefrontal cortex ကနေ Excitatory အချိုမှုသွင်းအားစုအတွက် VTA နှင့် NAc အတွက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုလွယ်ကူချောမွေ့  ။ ဆုချတုံ့ပြန်မှု dopamine အာရုံခံလည်း [က, dorsal striatum သို့လိင်စိတ်နိုးထနှင့် penile tumescence စဉ်အတွင်း activated တစ်ဒေသစီမံကိန်း67] ။ ထိုကဲ့သို့သော apomorphine အဖြစ် Dopamine agonists, [ပုံမှန်နှင့်ချို့ယွင်းနှစ်ဦးစလုံး erectile function ကိုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်စိုက်ထူသွေးဆောင်ပြခဲ့ကြ68] ။ ထို့ကြောင့်အကျိုးကိုစနစ်ပြ dopamine နဲ့ hypothalamus လိင်စိတ်နိုးထ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် penile စိုက်ထူအတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ [65,66,69].
ကျနော်တို့နာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်မှုကြောင့်တင်ပြသည်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ penile စိုက်ထူအုပ်ချုပ်သည့်ဆားကစ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲထံမှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပေါ်ပေါက်တစ်ခု etiology hypothesize ။ အချိုမှုသွင်းအားစုများနှင့်ပတ်သက်စေခြင်းငှါပုံမှန်ဆုလာဘ်ဖို့ဆုလာဘ်ကို system ရဲ့တုန့်ပြန်၏ downregulation ကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းတွေကိုမှ Hyper-reactivity ကိုနှစ်ဦးစလုံး။ ထိုသူနှစ်ဦးသည်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ [အလွဲသုံးစားမှုနှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနာတာရှည် overconsumption နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အကျိုးကိုစနစ် dopamine အပွောငျးအလဲကကမကထပြုခဲ့ကြသည်70,71,72].
3.3 ။ ကိုယ်ပိုင်အားဖြည့်လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း
အကျိုးကိုစနစ်ကထိုကဲ့သို့လိင်, စား, လူမှုရေးအဖြစ်အရေးပါအပြုအမူတွေ, သတိရနှင့်ပြန်လုပ်မှသက်ရှိအားပေးသကဲ့သို့, နာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနဲ့ self-အားဖြည့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာပေမည်  ။ အကျိုးကို system ကို [ရောဂါဗေဒသင်ယူမှုအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်96], အထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောစွဲပိုမိုအန္တရာယ်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် [97,98] နှင့် "deviant ညစ်ညမ်း" (bestiality နှင့်ကလေးညစ်ညမ်း) ၏ သာ. ကွီးမွတျအနာဂတ်အသုံးပြုမှု  ။ သုတေသနအများအပြားလိုင်းများ [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှုနှင့်စွဲလမ်း၏အာရုံကြောအလွှာအတွက်ထပ်တူ elucidate မှစတင်ပါပြီ100,101] ။ ဥပမာအားဖြင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ [အတူတူပင်ဆုလာဘ်စနစ်ကအဆောက်အဦများ (NAc, basolateral amygdala, anterior cingulated ဧရိယာ) အတွင်းအာရုံခံ၏တူညီသောအစုံကိုသက်ဝင်102] ။ ဆနျ့ကငျြအနည်းငယ်သာထပ်တူ [ထိုကဲ့သို့သောကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့အခြားသဘာဝကဆုလာဘ် (အစားအစာ, ရေ) နှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး, အကြားတည်ရှိ102] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏သဘာဝဆုလာဘ်မအဖြစ်ထို့ကြောင့်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်း [အတူတူယန္တရားများနှင့်အာရုံကြောအလွှာစုဆောင်းလေ့ကျင့်103] ။ ကြည့်ရှုသဘာဝမြင်ကွင်းများ [လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအခါအခြားလေ့လာမှုမှာ, ကိုကင်းစွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာနီးပါးတူညီဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများရှိခဲ့ပေမယ့်ဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ104].
ထို့အပွငျနှစ်ဦးစလုံးထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ထပ်ခါတလဲလဲ psychostimulant အုပ်ချုပ်ရေးမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လှုပ်ရှားမှုဖို့ mesolimbic dopamine system ကို sensitize အများအပြား neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများကိုအားပေးအားမြှောက်မယ့်ကူးယူအချက် [၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုတက်သွေးဆောင်103] ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်, တူညီတဲ့ NAc အာရုံခံ၌ဤထစည်းမျဉ်း [dopamine receptors မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်103] ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ် [လှုပ်ရှားမှုကို (တိုးလာမက်လုံးပေး salience) နဲ့ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့တစ်ဦးချင်းစီ Hyper-sensitized ပြန်ဆို105] ။ ဆက်စပ်တွေကိုထိတွေ့ပြီးတော့ [( "လို" တိုးပွားလာ) ကိုအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မတရားသောကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းနှင့် compulsive အသုံးပြုမှုကိုဦးတည်သွားစေခြင်းငှါ106] ။ အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်ခုနှစ်, သုတေသီများအိုး et al ။ "သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတူတူပင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆုံမသာ, သူတို့ကအတူတူပင်မော်လီကျူးပြုပြီအပေါ်ဆုံ, နှင့် NAc အတွက်တူညီတဲ့အာရုံခံအတွက်ဖွယ်ရှိသည်မက်လုံးပေး salience သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့နဲ့" ကြောင်းကောက်ချက်ချဆုလာဘ်နှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများ "လို " ။ တူညီသောသွေးကြောများတွင် Kraus, Voon နှင့် Potenza က 2016 ပြန်လည်သုံးသပ် "ဘုံ neurotransmitter စနစ်များ [compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ] အထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်မကြာသေးမီက neuroimaging လေ့လာမှုများတဏှာနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းတူညီမီးမောင်းထိုးပြစေခြင်းငှါ" ကြောင်းအတည်ပြု .
ယနေ့အထိ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အလားအလာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အဖြစ်ကောင်းစွာအရက်နှင့်ဆေးလိပ်အသုံးပြုရန်သူများ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်ကျယ်ပြန့် [သာမန်အပြုအမူများနှင့် ပို. ပို. လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်ပုံဖော်နေသည်108,109] ။ လူတို့သညျမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အတူကြည့်ရှုသူတို့၏ညစ်ညမ်းချိတ်ဆက်ဖို့နှေးကွေးနေဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, "အဘယ်သူသည်ဤသည်နေ့ရက်ကာလ porn ကိုကြည့်ဘဲနေရသနည်း" ငါတို့စစ်မှုထမ်းတစ်ဦးသည်သူ၏ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းအဖြစ်။ သူ [ပုံမှန်အဖြစ်မြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်၏ဖြစ်ကောင်းပင်သက်သေအထောက်အထားများကသူ့ပြဿနာတိုးတက်မှုမှတ်110] ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့စွဲ-related ဖြစ်စဉ်များတစ်ခုအရိပ်အယောင်ခဲ့ကြောင်းကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထား [လည်းမရှိ31,52,54,73,86,107,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122] ။ ဖင်လန်သုတေသနပညာရှင်များက [compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ဖို့ "အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေး" ကိုတွေ့ရှိခဲ့123] နှင့်အင်တာနက် applications များတစ်ဦးတည်းနှစ် longitudinal လေ့လာမှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအဘို့အမြင့်ဆုံးအလားအလာရှိစေခြင်းငှါထင်ရှား  အင်တာနက်ကိုနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအတွက်အနီးကပ်ဒုတိယကစားအတူ။ ယနေ့အထိ, အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (IGD) ကိုထပ်မံလေ့လာမှုအဘို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5) , အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲရောဂါမဟုတ်ရှိပါတယ်နေစဉ်။ သို့သော်ဗြိတိန်သုတေသီ Griffiths က၏ရှုထောအတွက် "လိင်စွဲလမ်းများအတွက်ပင်ကိုယ်မူလအခြေစိုက်စခန်း IGD နဲ့တန်းတူအပေါ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်"  ။ တကယ်တော့, အမျိုးမျိုးသောစွဲကျွမ်းကျင်သူများက [ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းအဖြစ်ပိုပြီးတိကျတဲ့ Subtype အတူ generalized ပြဿနာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့အင်တာနက်စွဲတောင်းဆိုနေကြပါတယ်118,126,127,128] ။ တစ်ဦးက 2015 ပြန်လည်သုံးသပ်လည်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲအဆိုပါ DSM အတွက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အင်တာနက်စွဲ [တဲ့မျိုးကွဲအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသင့်ကြောင်းကောက်ချက်ချ118].
စိတ်ဝင်စားစရာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယစစ်မှုထမ်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ချိန်ညှိအဆိုပါ DSM-5 အတွက် IGD များအတွက်အဆိုပြုထားသည့်သတ်မှတ်ချက်များစွာကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းနှင့်အတူ (1) အတွက်အဆက်မပြတ်; သူသည်အောက်ပါပြ အကျိုးဆက်အဖြစ်သူ၏စစ်မှန်သော-ဘဝလက်တွဲဖော်နှင့်အတူလိင်အတွက်အကျိုးစီးပွား (2) အရှုံး; ထိုကဲ့သို့သောဒေါသထွက်စေပြီးမကျေနပ်မှုအဖြစ် (3) ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေ; (4) မိမိမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုသက်သာရာရစေဖို့ညစ်ညမ်းရှာကြံ; ပြင်းထန်သောပြဿနာများကိုရှိနေသော်လည်းဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ (5) နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ပိုပြီးဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းနှင့် (6) တင်းမာမှု။
3.4 ။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများမှ Related Neuroadaptations
ကျနော်တို့ [ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ် hyperactivity နှင့် hypoactivity နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်ကြောင်း hypothesize72,129] နှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏အာရုံကြောဆက်စပ်, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံး, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ [31,48,52,53,54,86,113,114,115,120,121,130,131,132,133,134] ။ ကျနော်တို့သုံးအတန်ငယ်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောကဏ္ဍများသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှု၏ဤအပိုင်းတစ်ပိုင်းကျိုးပဲ့ပါပြီ။
3.4.1 ။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (Hyperactivity) အတွက်တိုးမြှင့်အခွင့်အရေး Salience
Hyperactivity အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်တွေကိုတစ်ဦးထိခိုက်, အေးစက်တုံ့ပြန်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ Sensitized သင်ယူမှု [မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဆုလာဘ်၏ cue-evoked ရှာပေးဖို့မက်လုံးပေး salience ၏အလားအလာရောဂါဗေဒအဆင့်ဆင့်၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအတွက်ရလဒ်တွေကိုတစ်ခုတိုးမြှင် mesolimbic dopamine စနစ်ကတုံ့ပြန်မှုကပါဝင်ပတ်သက်135,136,137] ။ အဆိုပါ mesolimbic dopamine system ကိုအမျိုးမျိုးသော cortical နှင့် limbic ဒေသများထံမှအချိုမှုသွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ လက်ရှိသီအိုရီတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆုလာဘ်ရှာကြံနှင့်ရယူသူနဲ့ဆက်စပ် glutamatergic synapses [ထိုနေ့ဆုလာဘ်ပေးရန် mesolimbic dopamine စနစ်၏တုန့်ပြန်မြှင့်တင်ရန်ရသောပြုပြင်မွမ်းမံ, ခံယူအကြံပြု100,138] ။ ဤရွေ့ကားအစွမ်းထက်အသစ်များကိုသင်ယူအသင်းအဖွဲ့များစွဲ၏ "မက်လုံးပေး-salience" (သို့မဟုတ် "မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု") သီအိုရီကိုအခြေခံ။
မိတ်ဖက်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏စစ်မှုထမ်းရဲ့အဆက်အသွယ်လေးစားမှုနှင့်အတူ, သူတို့ကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဖို့သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထ sensitized အဖြစ်မရှိတော့လိင်ပူးပေါင်းဖြစ်နိုင်သည်ကသူတို့အခွအေနေမျှော်လင့်ချက်များတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမရှိတော့စိုက်ထူထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့လုံလောက်သော dopamine များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ် [50,62,139] ။ Prause နှင့် Pfaus မှတ်ချက်သကဲ့သို့ "စစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဟာကျယ်ပြန့်သောအကြောင်းအရာများကို [လက်လှမ်းအွန်လိုင်း] မကိုက်ညီသည့်အခါ Erectile ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ"  ။ လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ [မျှော်လင့်ချက်များ (ကအနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှား) လို့ဆိုချင်ပါတယ်များမှာသောအခါ, mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှုဘယျလိုမှကြောင်းအကြံပြု140,141,142,143] ။ စွဲလေ့လာမှုများ [အတိအလင်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များမရှိခြင်းနှင့်အတူတွဲတွေကို dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် inhibitory သက်ရောက်မှုမှတ်သားခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြ72] ။ အပျက်သဘောဆောင်သောခန့်မှန်းအမှား, BANCA et al နှင့်ကိုက်ညီ။ (ကအေးစက် cue အောက်ပါ) အနေနဲ့မျှော်လင့်ထားသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်၏ပျက်ကွက်တုံ့ပြန် ventral striatal လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့ကျ [အစီရင်ခံတင်ပြ86] ။ BANCA et al ။ လည်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်, compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနှင့်ဆက်စပ်သော Conditions တွေကို (စိတ္တဇပုံစံများ) အတွက် preference ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံ86] ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် [အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းတွေကို, ငြိမ်းအေးဖို့အလွန်အမင်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုငျသောအသင်းအဖွဲ့များမှထိခိုက်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုအကြံပြု87].
Voon et al နေဖြင့်တစ်ဦးက 2014 fMRI လေ့လာမှု။ [compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများလေးစားမှုနှင့်အတူမက်လုံးပေး-salience (ထိခိုက်လွယ်) မော်ဒယ်ထောက်ခံမှုပေးသည်31] ။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများ ventral striatum, amygdala နှင့် dorsal anterior cingulate cortex အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်မှလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတူညီတဲ့အဓိကကွန်ယက်ကို [ဥစ္စာချိုးဖောက် cue reactivity ကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ပါတယ်144] ။ Voon et al ။ ထို့အပြင် "ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် [compulsive အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကို] သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိခဲ့သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုလိုသောနဲ့ခေါ်ဆောင်သွား [လျော့နည်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ] တွေကိုပိုမိုအကြိုက်ရမှတ်ခဲ့, အရှင်လိုသောနဲ့အကြိုက်အကြားတစ်ဦး dissociation သရုပ်ပြ" ကြောင်းအစီရင်ခံ  (စ။ 2) ။ စွဲလမ်း၏မက်လုံးပေး-sensitive မော်ဒယ်မှာတော့ "လို" နှင့် "အကြိုက်" အကြား dissociation [ရောဂါဗေဒသင်ယူမှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်စဉ်းစားသည်106] ။ ယင်း၏အသုံးပြုမှုကို ( "အကြိုက်") ကနေအပျော်အပါးလျော့ကျနေချိန်တွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဖို့စွဲ, ( "လို") တိုးသုံးစွဲဖို့, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်မတရားသောတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ။ ဤတွင်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသူများ tamer ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု "ကြိုက်တယ်", ဒါပေမယ့်အချိုးမတိကျပြတ်သားသောတွေကို "လိုချင်" ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဆင်တူ, Voon et al ။ ရဲ့ဘာသာရပ်များ (အသက် 25 ဆိုလို) ၏အများစု "ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် erectile အခက်အခဲများပိုမိုချို့ယွင်းခဲ့ပေမယ့်မပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်မြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒရမှတ်အဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြနှင့်အတူ တွေကိုနှင့်မမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ "ယေဘူယျ  (စ။ 5) ။ တူညီသောဘာသာရပ်များအများစုအပေါ်တစ်ဦးဆက်စပ်လေ့လာမှု [စွဲရောဂါအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုလေ့လာမှုတွေအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိကြောင်းဆင်တူ compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ပိုကောင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတွေ့ရှိရ111] ။ အဆိုပါသုတေသနအဖွဲ့က [ "အဲဒီလေ့လာမှုများအတူတကွ CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆီသို့ထစ်အငေါ့တုံ့ပြန်မှုအခြေခံစွဲတစ်ခုမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီ [compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ] ကိုထောက်ခံမှုပေး" ကောက်ချက်ချ111].
Seok နှင့် Sohn အားဖြင့်အထီး hypersexuals အပေါ်တစ်ဦးက 2015 fMRI လေ့လာမှုပုံတူကူးယူခြင်းနှင့် Voon et al များ၏တွေ့ရှိချက်များအပျေါမှာတိုးချဲ့ခဲ့သည်။  နှင့် Mechelmans et al ။  ရုံဖော်ပြထား  ။ seok နှင့် Sohn5s အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထိတွေ့သည့်အခါ hypersexuals သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်ကို Activation ခဲ့ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Voon et al [နေစဉ်31], အ dACC-ventral striatal-amygdala အလုပ်လုပ်တဲ့ကွန်ယက်ယုတ်ညံ့ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, dorsal anterior cingulate gyrus နှင့်, thalamus cue-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုဆန်းစစ်, Seok နှင့် Sohn သည် dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) တွင် caudate နျူကလိယလှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်။ seok နှင့် Sohn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုက်ရိုက် DLPFC နှင့် thalamus ၏ cue-သွေးဆောင် activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းကဆက်ပြောသည်။ တစ်ဦးကတတိယတွေ့ရှိချက်ထိန်းချုပ်မှု hypersexuals နှိုင်းယှဉ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှကြားနေလှုံ့ဆော်မှုသေးဝေးလျော့နည်း DLPFC activation ဝေး သာ. ကြီးမြတ် DLPFC activation ခဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါက [စွဲတွေကိုတိုးမြှင် sensitivity ကိုပုံမှန်အကြိုးလှုပ်ရှားမှုများတွင်လျော့နည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူဒွန်တွဲသည်အဘယ်မှာရှိစွဲနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လည်ပတ်ပုံမှန်မဟုတ်သော prefrontal cortex ကိုထင်ဟပ်145] ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် hyperactivity နှင့်ဦးနှောက်ရဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်၏ hypoactivity နှစ်ဦးစလုံး compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆနှင့်အတူ aligns ။
အထီးလိင်ကွဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုအပေါ်တစ်ဦးက 2016 fMRI cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုယခင်တွေ့ရှိချက်အပေါ်တိုးချဲ့  ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ ventral striatum လှုပ်ရှားမှု Non-နှစ်သက်သောညစ်ညမ်းပစ္စည်းမှနှိုင်းယှဉ်ပါကဦးစားပေးညစ်ညမ်းပစ္စည်းများအတွက်ကြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, နှစ်သက်သောညစ်ညမ်းပစ္စည်းများအတွက်ပိုမိုအားကောင်း ventral striatum လှုပ်ရှားမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းအသုံးပြုမှု Self-အစီရင်ခံရောဂါလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလက္ခဏာတွေပါ (s ကို-IATsex အားဖြင့်အကဲဖြတ်ကဲ့သို့) Non-နှစ်သက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနှိုင်းယှဉ်ပိုမိုနှစ်သက်ဖို့ ventral striatum တုံ့ပြန်မှု၏တစ်ခုတည်းသောသိသိသာသာခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဘာ၏အပတ်စဉ်ပမာဏ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ယေဘုယျအားဖြင့် hypersexual အပြုအမူ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူ့ sensitivity ကိုလက္ခဏာတွေ, နှင့်လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ပြင်းထန်မှု၏ညွှန်းကိန်းများကဲ့သို့သောအခြား variable တွေကို, cue-သွေးဆောင် ventral striatum လှုပ်ရှားမှုဆက်စပ်ခဲ့ပါဘူး။ ရိုးရှင်းစွာထားပါကအကောင်းဆုံးကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလက္ခဏာတွေခန့်မှန်းကြောင်းာင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် et al ။ [ "အဆိုပါတွေ့ရှိချက်: IPA [အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ] နှင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-related မမှန်အကြားမျဉ်းပြိုင်ကိုအလေးပေး" ကောက်ချက်ချ54].
တစ်ဦးက 2016 fMRI လေ့လာမှု (Klucken et al ။ )  လိင်ကွဲအထီး၏အုပ်စုနှစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူဘာသာရပ်များ (CSB) နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု။ ပုံမှန်အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအပတ်စဉ်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်ထိုအတောအတွင်းထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်များအတွက် CSB အုပ်စု 1187 မိနှင့် 29 မိခဲ့သည်။ သုတေသီများသည်ယခင်ကကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (ရောင်စုံရင်ပြင်) တစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံများ၏တင်ပြချက်ခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်အေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားလုံးကိုဘာသာရပ်များနှင့်ထိတွေ့။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ CSB အတူဘာသာရပ်များအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံခန့်မှန်းသည့်အေးစက် cue ၏တင်ဆက်မှုစဉ်အတွင်း amygdala ၏တိုးမြှင့် activation ပြသ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် [ပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတိုးလာ amygdala activation သတင်းပို့လေ့လာမှုများနှင့်အတူ aligns146] ။ Voon et al ။ လည်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဗီဒီယိုများကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုထက် CSB ဘာသာရပ်များအတွက် သာ. ကြီးမြတ် amygdala activation သွေးဆောင်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသုတေသနအေးစက် appetitive ဖို့ amygdala ချိတ်ဆက်တိရိစ္ဆာန်သုတေသနနှင့်အတူပါတယ်။ ဥပမာ, amygdala အတွက် opioid circuitry လှုံ့ဆော်ဖို့တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဓိကပစ်မှတ်၏ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုတစ်ပြိုင်နက်လျော့ချရေးဖြင့်လိုက်ပါသွားတဲ့အေးစက် cue ဆီသို့ဦးတည်မက်လုံးပေး salience ပြင်းထန်မှု, ခြီးမှမျး  ။ Klucken et al အတွက် CSB အုပ်စုတစ်စုနေစဉ်။  တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ image ကိုခန့်မှန်းတဲ့ cue ပိုမို amygdala activation ခဲ့, သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထထိန်းချုပ်မှုထက်မပိုမြင့်ခဲ့သည်။ ဝင်ရိုးတန်းငါနှင့်ဝင်ရိုးတန်း II ကို diagnoses များအတွက်မျက်နှာပြင်မှတွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့အခါမှာထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအဘယ်သူအားမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသတင်းပို့စဉ်စိတ်ဝင်စားစရာနှစ်ဆယ် CSB ဘာသာရပ်များသုံးခု, "အော်ဂဇင်-စိုက်ထူရောဂါ" ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် Voon et al ပြန်ပြောပြသည်။ မည်သည့်အတွက် CSB ဘာသာရပ်များရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများ သာ. ကြီးမြတ် amygdala-ventral striatum-dACC activation ခဲ့သေး 11 ၏ 19 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူ erectile သို့မဟုတ် arousal အခက်အခဲများသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Klucken et al ။ လည်းတွေ့ရှိခဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် ventral striatum နှင့် CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal cortex အကြားနားချင်းဆက်မှီလျော့နည်းသွားသည်။ လျော့နည်းသွား ventral striatal-PFC နားချင်းဆက်မှီ [ဥစ္စာမမှန်အစီရင်ခံခဲ့ပြီးချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့ယုံကြည်145].
သံမဏိ et al နေဖြင့်တစ်ဦးက 2013 EEG လေ့လာမှု။ [သူတို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိပြဿနာများ၏ဝေဖန်ပြောဆိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကြားနေပုံများ, မှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှပိုမိုမြင့်မား P300 လွှဲခွင်, အစီရင်ခံတင်ပြ48] ။ သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အမြင်အာရုံတွေကိုထိတွေ့သည့်အခါပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံးလည်း [ သာ. ကြီးမြတ် P300 လွှဲခွင်ပြ148] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သံမဏိ et al ။ [တနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့ P300 လွှဲခွင်နှင့်အလိုဆန္ဒအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံတင်ပြ48] ။ သံမဏိ et al အစီရင်ခံအဖြစ်ပူးပေါင်းလိင်များအတွက်လျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူတွဲကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းပိုမို cue reactivity ကို။ , အ Voon et al နှင့်အတူ aligns ။ compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက် "အထူးသမိန်းမနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်လျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကို" ၏တွေ့ရှိချက်  ။ ဤတွေ့ရှိချက် supporting "hypersexuals" ၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အ erectile function ကိုအကဲဖြတ်နှစ်ခုလေ့လာမှုများနှင့် compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် [hypersexuality ၏အစီအမံအကြားအသင်းအဖွဲ့များကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ပူးပေါင်းလိင်နှင့်လိင်အခက်အခဲများဘို့အလိုဆန္ဒလျှော့ချ15,30] ။ ထို့အပြင်ပြီးခဲ့သည့်သုံးလအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးသူကို 2016 ယောက်ျား၏ 434 စစ်တမ်းပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း [arousabilty ၏အဆင့်မြင့်နှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်သော်လည်း, နိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆင်းရဲတဲ့ erectile function ကိုခံခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်44] ။ ဤရလဒ်သည်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းတွေကိုနှင့်မတရားသောမှလိင်စိတ်နိုးထ [အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကျဘာစွဲနှင့် Self-အစီရင်ခံပြဿနာများ၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့တွေ့ပြီသောမျိုးစုံ neuropsychology လေ့လာမှုများ၏အလငျး၌ကြည့်ရှုအားပေးရပါမည်52,53,54,113,115,149,150] ။ အတူတူယူ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများမျိုးစုံနှင့်မတူညီလေ့လာမှုများတစ်ခုမက်လုံးပေး၏ဆွဲဆောင်မှုတန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲမှုများထိခိုက်မခံတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသ activation ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူကိုက်ညီသောစွဲလမ်း၏မက်လုံးပေး-salience သီအိုရီ [အတူ align31,106] ။ တက် Sum, ငါတို့အယူအဆနှင့်အတူ alignment ကိုအတွက်အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများညစ်ညမ်းတွေကို, ကြည့်ရှုရန်မတရားသောနှင့် compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဆီသို့ သာ. ကြီးမြတ် reactivity ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်မိတ်ဖက်များအတွက်လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုသတင်းပို့ပါ။
3.4.2 ။ ထိခိုက်လွယ်မှု (Hypoactivity) ၌ဆပ်လျော့နည်းသွား
ရုံဖော်ပြထားသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေကိုရန် hyperactive တုံ့ပြန်မှုနှငျ့မတူဘဲ, hypoactivity [ပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဆုလာဘ် sensitivity ကိုတစ်ဦး concomitant ကျဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်70,151,152,153], ထိုကဲ့သို့သောပူးပေါင်းလိင်အဖြစ် [31,48] ။ ဤသည်ကျဆင်းခြင်းလည်းသည်းခံစိတ်နောက်ကွယ်တွင်  နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီး [153,154,155,156], အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အခြားအမျိုးအစားများအပါအဝင် [157,158,159] အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းမှ .Our စစ်မှုထမ်းရဲ့သည်းခံစိတ်ကိုပိုမိုလွန်ကဲပစ္စည်းကြည့်ရှုရန်ဦးဆောင်မျှမျှတတလျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Self-ရွေးချယ်ထားသည့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအားအခြားအညစ်ညမ်းလေ့သို့မဟုတ်သည်းခံစိတ်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါထက်ပို arousal ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို [27,75,79,81,160] ။ ဥပမာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ထက်တစ်ဦးကြားနေရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးသူကိုယောက်ျားအကြာတွင်လေ့တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောအရိပ်အယောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်  ။ ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတိပ်ခွေမရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်မဟုတ်ရှည်လျားပြီးနောက်သုတေသီများလည်း [ကြည့်ရှုသူတို့အလျင်အမြန်ပိုပြီးအစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းမှဆိုးရွားလာခဲ့သည်ကွဲပြား themes များ၏ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတိပ်ခွေမှကြော်ငြာ libitum access ကိုပေးခဲ့သောအခါရှာဖွေတွေ့ရှိ162] ။ သာ. ကြည့်ရှုအားပေးပိုသောဗီဒီယိုညစ်ညမ်း, အမာခံ themes များအဘို့အလိုဆန္ဒ [27,43,162], လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်ကျဆင်းနေ၏ညွှန်ပြ။ (တနည်းကား, မှန်မှန်ကဗီဒီယိုညစ်ညမ်းစားသုံးတဲ့သူ Kinsey Institute မှဘာသာရပ်များ၏ထက်ဝက် [အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာနည်းနည်း erectile တုန့်ပြန်ပြနှင့်ပိုပြီးအသစ်အဆန်းများနှင့်အမျိုးမျိုးများအတွက်လိုအပ်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်27] နှင့်လည်းမကြာသေးမီကစစ်တမ်းကောက်ယူညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်၏ထက်ဝက်ယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားမပစ္စည်းကိုမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သောဒါမှမဟုတ်သူတို့ [စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တွေ့ရှိခဲ့ရသော44] (စ။ 260) ။ ) အခြားလေ့လာမှု၌, မိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, ချစ်ခင်စုံမက်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသိချင်စိတ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာအဖြစ်ပြောင်းပြန် [ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောခဲ့သည်43] ။ pair တစုံ-Bond နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူအစွန်းရောက်ဆွ mesolimbic dopamine receptors ၏ activation မှတဆင့် pair တစုံ-Bond ချို့ယွင်း  နှင့်ယနေ့ပုံမှန်ထက်ထူးကဲစွာလှုံ့ဆော်ခံရသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူအချို့တွင်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်သည်။
Kühnအားဖြင့်အချို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် '' ဆုလာဘ်စနစ်များကိုလိင် (အဖြစ် Hyper-reactive တွေကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်) ပူးပေါင်းတုံ့ပြန် hypoactive ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုချက် non-compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦး 2014 fMRI လေ့လာမှုနှင့်အညီနှင့် Gallinat [သည့် striatum ၏ညာဘက် caudate ကြည့်ရှုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပိုမိုနာရီနှင့်အနှစ်တွေနဲ့သေးငယ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ134] သဖြင့် caudate [ချဉ်းကပ်-attachment ကိုအပြုအမူတွေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ပေါ်လာသည်နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များရှိပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကို164,165] ။ ဘယ်ဘက် putamen အတွက် activation ဒါ့အပြင်အဆိုပါဘာသာရပ်များ '' အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကို သာ. , အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနေဆဲဓာတ်ပုံများ (0.530 s ကိုထိတွေ့မှု) ကြည့်ရှုသည့်အခါ။ အဆိုပါ putamen ၏ activation [လိင်စိတ်နိုးထနှင့် penile tumescence နှင့်ဆက်စပ်နေသည်67,166] ။ အဆိုပါစာရေးဆရာ [နှစ်ဦးစလုံးတွေ့ရှိချက် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှသဘာဝအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုတစ်ခု downregulation အတွက်ညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုရလဒ်များကိုဖို့ယူဆချက်ကြောင့်ပြင်းထန်သောထိတွေ့မှုနှင့်အညီ" ခဲ့ကြသည်အကြံပြု134] ။ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, လိင်တံအရွယ်အစား, နဲ့တခြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ထက်တစ်ခုစိုက်ထူရေရှည်တည်တံ့ဖို့စွမ်းရည်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာအစီရင်ခံစာa"ကိုစော်ကားသောသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းအတွက်ပိုမိုမြင့်မားအကျိုးစီးပွား" နဲ့ယောက်ျား သာ. ကြီးမြတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ  ။ တွေးဆအမျှအစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု [အရှင်ဖျော်ဖြေဖို့ပိုပြီးအစွန်းရောက်သို့မဟုတ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုတွေအကြောင်းလိုအပ်ကားမောင်းအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်လျော့စေခြင်းငှါ27] ။ နောက်တဖန်တစ် 2016 လေ့လာမှု [ "သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်းယခင်ကသူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့သို့မဟုတ်မ" စစ်တမ်းကောက်ယူယောက်ျား၏ထက်ဝက်ပစ္စည်းမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်44].
Prause et al နေဖြင့်တစ်ဦးက 2015 EEG လေ့လာမှု။ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ (3.8 s ကိုထိတွေ့မှု) ကြည့်ရှုအားပေးအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှု၎င်းတို့၏ကြည့် (0.6 ဇ / ရက်သတ္တပတ်ဆိုလို) အကြောင်းကိုဒုက္ခရောက်နေခဲ့ကြသောသူသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏နှိုင်းယှဉ်လျှင်မကြာခဏကြည့်ရှု (1.0 ဇ / ရက်သတ္တပတ်ဆိုလို)  ။ Kühnနှင့် Gallinat မှုနဲ့အပြိုင်တဲ့တွေ့ရှိချက်များတွင်မကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှု [ထိန်းချုပ်မှုထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှလျော့နည်းအာရုံကြော activation (LPP) ပြသ130] ။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် [နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျလာသောပိုမိုအမြင်အာရုံဆွလိုအပ်ကြောင်းအကြံပြု167,168] ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Kühnနှင့် Gallinat ပိုမိုမြင့်မားသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားအနိမ့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီ circuitry အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုမသက်ဆိုင်အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်၏မသင့်လျော်အပြုအမူရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောထားပြီး  ။ Kühnနှင့် Gallinat နှင့်အညီ, neuropsychological လေ့လာမှုများ [ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျဘာစွဲဆီသို့ပိုမိုမြင့်မားသဘောထားကိုနှင့်အတူဘာသာရပ်များအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု function ကိုလျှော့ချခဲ့ကြကြောင်းသတင်းပို့53,114].
BANCA et al နေဖြင့်တစ်ဦးက 2015 fMRI လေ့လာမှု။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်, compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဘာသာရပ်များဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက် သာ. ကွီးမွတျရှေးခယျြမှု preference ကိုဖူးကြောင်းအစီရင်ခံ  ။ အသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှု-ရှာစှဲအတော်ကြာအမျိုးအစားများကိုပိုမိုအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နေချိန်မှာ  BANCA et al ။ compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအကြားအာရုံ-ရှာကြံရမှတ်များမကွဲပြားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစာရေးဆရာအသစ်အဆန်းများအတွက် preference ကိုအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြီးနှင့် [novelty- သို့မဟုတ်အာရုံ-ရှာကြံယေဘူယျမဟုတ်ကြောင်းအကြံပြု86] ။ ဤရလဒ်သည်အမှတ်တံဆိပ် et al နှင့်အတူ align ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှုထောငျ့ကျဘာစွဲမှဆက်စပ်မဟုတ်ကြစဉ် [က, IATsex မေးခွန်းလွှာသုံးပြီးစွဲတစ်ခုသိသာခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ် "လိင် applications များ၏နံပါတ်အသုံးပြုသော" တွေ့ရှိခဲ့ရသော (2011),53] ။ BANCA et al ။ ထို့အပြင် compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် [အတူတူပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏ထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ရှုရန် dorsal anterior cingulate cortex (dACC) တွင် သာ. ကွီးမွတျလေ့ပြသကြောင်းအစီရင်ခံ86] ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ dACC လေ့၏ဒီဂရီ [ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် သာ. ကြီးမြတ် preference ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်86] ။ အဆိုပါ dACC [မူးယစ်ဆေး cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာအဖြစ်မျှော်လင့်ထားနှိုင်းယှဉ်မမျှော်လင့်ဘဲဆုလာဘ်၏အကဲဖြတ််ပတ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်144,171] ။ Voon et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများတုံ့ပြန် compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဘာသာရပ်များအစီရင်ခံတိုးမြှင် dACC လှုပ်ရှားမှု  ။ BANCA et al ။ ရဲ့တွေ့ရှိချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန် compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအသစ်အဆန်းရှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမိုလျင်မြန်လေ့မောင်းနှင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါသုတေသီများ [ "ကျနော်တို့ [compulsive အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု] ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အသစ်အဆန်း-ရှာ, အေးစက်နှင့်လေ့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းဆေးပညာရှုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်မှုတွေအဘယ်အရာကိုပြသ" ကောက်ချက်ချ86] ။ တစ်ဦးဆက်စပ်လေ့လာမှုမှာအဲဒီတူညီတဲ့ဘာသာရပ်များအများအပြားလည်းပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလိင်စိတ်နိုးထနှင့် erectile အခက်အခဲများအစီရင်ခံမဟုတ်ဘဲအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းခဲ့  ။ ဤသည်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများပူးပေါင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်လိုက်ဖက်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအသစ်အဆန်း၏အခွအေနေမျှော်လင့်ချက်များမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ဖြစ်မည်အကြောင်းဆိုလို။ အတူတူယူKühnနှင့် Gallinat  Prause et al ။  နှင့် BANCA et al ။  ကြောင်းမကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကပြပွဲ (1) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှအကျဉ်းထိတွေ့တုန့်ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation သရုပ်ပြ; ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် (2) သာ. ကြီးမြတ် preference ကို; (3) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ dACC လေ့ပိုမြန်; အဆိုပါ caudate အတွက်နှင့် (4) လျော့နည်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်လေ့နှင့်သည်းခံစိတ်အဖြစ်လိင်နှိုးဆွဖြစ်လာပိုမိုဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းမှဦးဆောင်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုလျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါ၎င်းယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။
psychogenic ED စုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာရေး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အနိမ့်လိင်စိတ်အတွက်ဆုလာဘ် system ကို hypoactivity ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့နောက်ထပ်ထောက်ခံမှုပေး။ Dopamine agonist apomorphine psychogenic ED နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် penile စိုက်ထူ elicits  ။ တစ်ဦး 2003 fMRI လေ့လာမှုဦးနှောက်ပုံစံများစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ psychogenic ED နှင့်အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးနေစဉ်, psychogenic ED နှင့်အတူသူတို့အား cortical နှင့် subcortical ဒေသ activation ၏ဘွဲ့အတွက်အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုကနေသိသိသာသာကွဲပြားပါတယ်။ [သိသိသာသာတိုးလာ striatal နှင့် cortical Deactivate နဲ့ပေါင်းစပ် hypothalamic လှုပ်ရှားမှု: dopamine agonist apomorphine psychogenic ED နှင့်အတူလူတို့အားအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်သောအခါ, အစွမ်းထက်ထိန်းချုပ်မှုတွင်တွေ့မြင်သူတို့အားအလားတူဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများထုတ်လုပ်173] ။ ထို့အပြင်တစ်ဦး 2012 MRI လေ့လာမှု [တဲ့ striatal ၏လျှော့ချရေးနှင့် hypothalamic မီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့် psychogenic ED အကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့174] ။ တစ်ဦးက 2008 လေ့လာမှု [တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်တုံ့ပြန် psychogenic ED ပြတုံး hypothalamic လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူယောက်ျားသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်175].
3.4.3 ။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရခြင်းနှင့်နှိုးဆွမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်၎င်းမပါဝင်ဘဲယနေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့် ၄၀ နှစ်အောက်ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်ကျခြင်းတို့အတွက်မတော်တဆလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်မှုကိုဖယ်ထုတ်ရန်သုတေသနပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ Prause နှင့် Pfaus တို့သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်အစစ်အမှန်ဘဝမိတ်ဖက်အခြေအနေများသို့အလွယ်တကူမကူးပြောင်းနိုင်သောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ရှုထောင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုယူဆကြသည်။ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအများစုကို VSS [အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ] အတွင်းတွင်တွေ့ကြုံခံစားရခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်ကာလအတွင်း erectile တုန့်ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ မြင့်မားသောဆွသောမျှော်လင့်ချက်များမပြည့်စုံပါက၊50] ။ ထိုသို့သောအမှတ်တမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်သည့်မက်လုံးပေး-salience မော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ သုတေသနသက်ရောက်မှုတွေအတော်ကြာလိုင်းများ [အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်နှစ်ခုစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများထိခိုက်မခံတဲ့အတွက် mesolimbic dopamine တိုးလာ100,103] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့် psychostimulant ထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံး [တိုးမြှင့်နှစ်ဦးစလုံးဆုလာဘ်များချို့တဲ့မှုအတွက်အရေးပါသည့် NAc အတွက်တူညီတဲ့ကြာရှည် neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများအများအပြားသွေးဆောင်, dopamine D1 receptors မှတဆင့်သရုပ်ဆောင်103].
ယနေ့အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူကြောင့်န့်အသတ်ဝတ္ထုအကြောင်းအရာတိုးချဲ့ကာလအဘို့, လိင်စိတ်နိုးထမြင့်မားခြင်း, concomitant မွငျ့မား dopamine ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အမြင့် dopamine ပြည်နယ်များ [နှစ်ဦးစလုံးတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်မျှော်လင့်မထားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ176,177] နှင့်လူသားမြားသညျ။ လူသားများတွင်ပါကင်ရဲ့လူနာ dopamine agonists သတ်မှတ်ထားသောခဲ့ကြသည်အခါ, အချို့ uncharacteristic compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်တိုးမြှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံတွေကိုပိုမိုအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြ  ။ နှစ်ဦးကိုမကြာသေးခင်က fMRI လေ့လာမှုများ [compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူဘာသာရပ်များထိန်းချုပ်မှုထက်တရားဝင်ကြားနေတွေကိုနှင့်အကဲဆတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများအကြား conditional အသင်းအဖွဲ့များထူထောင်ဖို့ပိုကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်86,121] ။ ထပ်ခါတလဲလဲအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူ "လို" ပူးပေါင်းလိင်စဉ်အတွင်းရေရှည်တည်တံ့ဖို့ဒြပ်စင်ခက်ခဲ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရဲ့မျှော်မှန်းထားအသစ်အဆန်းများနှင့်အမျိုးမျိုးများအတွက်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်အခြေအနေနိုငျသောအယူအဆနှင့်အညီ, Seok နှင့် Sohn [ထိန်းချုပ်မှု hypersexuals နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသေးလျော့နည်း DLPFC activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပိုမို DLPFC activation ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ120] ။ ဒါဟာအစကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမျှော်လင့်ထားသို့မဟုတ်အသစ်အဆန်း "ချင်" ကိုအသုံးပြုသူအခြေအနေနိုငျသောပုံပေါ်ပါတယ်။ BANCA et al ။ [compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အတူဘာသာရပ်များဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအဘို့ သာ. ကြီးမြတ် preference ကိုခဲ့ရသည်နှင့်အတူတူပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏ထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ရှုရန် dorsal anterior cingulate cortex အတွက် သာ. ကွီးမွတျလေ့ပြသကြောင်းအစီရင်ခံ86] ။ အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်မှာတော့အသစ်အဆန်းတစ်ခု preference ကို [, အလှည့်အတွက်အသစ် conditional ညစ်ညမ်းအရသာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသော, ကျဆင်းနေလိင်စိတ်နှင့် erectile function ကိုကျော်လွှားရန်လိုအပ်ကြောင်းကနေပေါ်ပေါက်27].
အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်သူ၏လိင်မှုဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားပြသခဲ့သောအခါ၊ ဆန္ဒရှိသည့်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုသည်“ မျှော်လင့်ချက်နှင့်မကိုက်ညီသော” (မကောင်းသောဆုလာဘ်ခန့်မှန်းချက်) အဖြစ်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ ပိုပြီးလှုံ့ဆော်မှုကိုနှိပ်ရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်းနှင့်အတူဤမပြည့်စုံသေးသောခန့်မှန်းချက်သည်လိင်မှုကိစ္စသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟူသောစွဲမှတ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများသည်လိင်တူချင်းလိင်ဆက်ဆံမှုတွင်အများအားဖြင့်မရနိုင်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူသည်သူအလွန်အမင်းနှိုးဆွနေစဉ်နှိုးဆွခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုလိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကြားရှိဆက်သွယ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်ဆိုပါကသူနှိုးဆွမှုနှင့်တကယ့်ဘဝမိတ်ဖက်လိင်ဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှုများအကြားဆက်သွယ်မှုအားနည်းသွားနိုင်သည်။
လူသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအေးစက်အပေါ်သုတေသနကန့်သတ်, ဒါပေမဲ့လိင်စိတ်နိုးထအေးစက်ကြောင်းပြသထားတယ် [179,180,181] နှင့်လူကြီးဖို့အထူးသဖြင့်ကြိုတင်  ။ လူတို့သညျတှငျ, arousal အထူးသဖြင့်ရုပ်ရှင်မှအေးစက်နိုင်ပါသည်  အဖြစ်ပုံရိပ်တွေဖို့  ။ အထီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု (Non-လူ့) တိရစ္ဆာန်များ, အသီး / ခွံမာသီးရနံ့အပါအဝင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုသူတို့အဘို့လိင်အဓိကမဟုတ်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုတခုခင်းကျင်းတို့အားဤသို့သော cadaverine, လိင်တူချင်းမိတ်ဖက်များနှင့်ဝတ်ထားအဖြစ်ဆန္ဒရှိရနံ့, အေးစက်နိုင်ပါသည် ကြွက်အကျီ၏ [177,185,186,187] ။ ဥပမာအားဖြင့်, လိင်ကြွက်သင်ယူခဲ့ကွောငျး နှင့် တစ်ဦးဂျာကင်အင်္ကျီပုံမှန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး မပါဘဲ သူတို့ရဲ့အကျီ .
လူတို့သညျပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုစတင်ကအဘို့ သာ. သူတို့ရဲ့ preference ကိုကျော်သူတို့ရဲ့လက်ရှိအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ဆက်ဆံ, သူတို့ကပူးပေါင်းလိင်ကနေသတင်းပို့နည်းခံစားပူးပေါင်းနှင့်အဆင့်မြင့်အရာမှာအသက်အရွယ်ကဤအေးစက်လေ့လာမှုများနှင့်အညီ, အငယ်  ။ အလားတူပင်အနေနဲ့အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာတိုးလာ (သရုပ်ဆောင်များကိုကွန်ဒုံးဝတ်ဆင်မထားတဲ့အတွက်) bareback စအိုညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုနှင့်၎င်း၏စားသုံးမှုသတင်းပို့ယောက်ျား, ပိုပြီးအကာအကွယ်မဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံ [188,189] ။ ညစ်ညမ်း၏အစောပိုင်းစားသုံးမှုကိုလည်းပိုပြီးအစွန်းရောက်ဆွဖို့အေးစက်အရသာနဲ့ဆက်စပ်စေခြင်းငှါ [99,190].
လိင်စိတ်နိုးထတင်းပလိတ်များကဲ့သို့အရေးပါအစောပိုင်းအေးစက်မှ Pfaus မှတ်အားဖြင့်တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: "ဒါဟာလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အလိုဆန္ဒ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, အော်ဂဇင်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အတူတစ်ဦးချင်း၏ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံတွေကိုန်းကျင်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အရေးပါသောကာလရှိကွောငျး ပို. ပို. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုယ်တိုင်က " (စ။ 32) ။ အရေးပါသောဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလ၏အကြံပြုချက် Voon et al ၏အစီရင်ခံစာနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ကြောင်းအငယ် compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် [ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဗီဒီယိုများတုံ့ပြန်အတွက် ventral striatum အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုပြသ31] ။ အဆိုပါ ventral striatum [သဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မူလတန်းဒေသဖြစ်ပါသည်103] ။ Voon et al ။ ထို့အပြင် [compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဘာသာရပ်များပထမဦးဆုံး (အသက် 13.9 ဆိုလို) ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းထက် (အသက် 17.2 ဆိုလို) အများကြီးအဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးကြောင်းအစီရင်ခံ31] ။ တစ်ဦးက 2014 လေ့လာမှု 13 သာ 14% နှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ကောလိပ်အရွယ်ယောက်ျား၏ထက်ဝက်ခန့်သည်ယခုအခါ [သူတို့ကြိုတင်အသက်အရွယ် 2008 အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့သည်သတင်းပို့ကြောင်းတွေ့ရှိရ37] ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း-related ပြဿနာများ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်တစ်ဦးဝေဖန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအဆင့်စဉ်အတွင်းအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်ရနိုင်မလား? ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကတစ်ပါတ် Non-စားသုံးသူအတွက် 2015% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အစီရင်ခံထက်ပိုပြီးအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတဲ့ငယ်ရွယ်အီတလီယောက်ျား၏ 16% တှေ့0ရှင်းပြကူညီပေးနိုငျ ? ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစစ်မှုထမ်းသာ 20 ခဲ့သူမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် access ကိုရရှိခဲ့စဉ်ကတည်းကအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသုံးပြီးခဲ့သညျ။
[အထီးကိုအောင်မြင်စွာသင်ကြားပို့ချတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူဓာတ်ခွဲခန်းမှာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအခြေအနေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်အားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲ, ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ခွဲခန်း-သွေးဆောင်အေးစက်အကြာတွင်စမ်းသပ်မှုများတွင်ပျောက်ကွယ်သွား176] ။ ဒါကမွေးရာပါ neuroplasticity ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းနှစ်ခုဟာလိင်ကစားစရာစွန့်ခွာနှင့် / သို့မဟုတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်ပြန်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပွနျလညျထူထောငျကိုဘယ်လိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ အတုလှုံ့ဆော်မှုမှ conditional တုံ့ပြန်မှုအလားအလာပွနျလညျထူထောငျဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျဆင်းသို့မဟုတ် extinguishing ။
4 ။ သုံးသပ်ချက်နှင့်အကြံပြုချက်များ
တစ်ချိန်ကအမျိုးသားများတွင်လိင်မှုကိစ္စပြdifficultiesနာများကိုရှင်းပြခဲ့သည့်ရိုးရာအကြောင်းရင်းများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများသိသိသာသာမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အမျိုးသား ၄၀ နှစ်အောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒများနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုစာပေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြသည်။ အမူအကျင့်ပြုပြင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသရုပ်ပြရန်ဘာသာရပ်များရှိခြင်းအားဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ပြောင်းလဲမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရကျန်းမာသောသင်တန်းသားများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုသုံးပတ်မျှသာကြည့်ရှုရန်ကြိုးပမ်းသည့်အခါနှောင့်နှေးခြင်းလျှော့ခြင်းနှုန်းထားများ (ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသည့်နှောင့်နှေးနေသောဆုလာဘ်များမှချက်ချင်းကျေနပ်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်း) သည်လျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (အရှုံးပေးရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) တစ်ချိန်တည်းကာလအဘို့မိမိတို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ)  ။ အပြုအမူနှင့်တက်ပေးသောလှုံ့ဆော်မှု၏သဘောသဘာဝနှစ်ဦးစလုံး key ကို variable တွေကိုခဲ့ကြသည်။
အော်ဂဲနစ်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုမူလအစစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရယူဆထားကြသောကြောင့်စိတ်ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏ပြည်နယ်ဖြစ်သော်လည်းငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများတွင်ယခုအခါသိသိသာသာမြင့်တက်လာသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ (ED, orgasming အခက်အခဲ၊ လိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုနည်းပါးခြင်း) သည်အတိုင်းအတာအထိ၎င်းတို့သည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသော်လည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းအားဖြင့်“ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်” (ဆိုလိုသည်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ICD-9 code 302.7) မှထွက်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ အနာဂတ်သုတေသီများသည်ယနေ့အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပို့ဆောင်ခြင်း၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့မဟုတ်ယခင်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစားသုံးခြင်းသည်အဓိကကျသည့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများလည်း non-အော်ဂဲနစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တဲ့အထံတော်အဖြစ်မဟုတ်ရင်ကျန်းမာယောက်ျားအင်တာနက်ညစ်ညမ်း-related အခက်အခဲများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတည်ပြုစိစစ်ရေးကိရိယာများဘို့လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ အဆုံးစွန်သောမကြာခဏရိုးရှင်းစွာအမူအကျင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်နောက်ပြန်လှည်ဖြစ်နိုင်သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲမရှိသေးပါအထူးအရာရှိတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအတွက်ဝိုငျးကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူပုံမှန်အားနည်းချက်လူနာထွက်ခွာ, သူတို့အဘို့အပြကြဘူး။ ဤကိစ်စတှငျမှန်ကန်စွာလူနာအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ညစ်ညမ်း-ကူညီတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှညစ်ညမ်း-အခမဲ့ခွဲခြားရန်အရေးပါဖြစ်နိုင်သည်။ လူနာ masturbating စဉ်စိုက်ထူ, arousal နှင့်ထှတျအထိပျမခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်ပူးပေါင်းလိင်စဉ်အတွင်းပြဿနာများသတင်းပို့ပါလျှင်အစဉ်အလာ, သူတို့ psychogenic, အော်ဂဲနစ်, မပြဿနာများရှိသည်ယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ငယ်ရွယ်လူနာသူတို့ရဲ့ပူးပေါင်း-လိင်အခက်အခဲအမှန်တကယ်တွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-ဆက်စပ်နေပါတယ်အခါ, "တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ" "အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အကူအညီနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ" ကိုရည်ညွှန်းသည်, ထို့ကြောင့် "စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်" ရှိခြင်းအဖြစ်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုယူဆစေခြင်းငှါသူတို့၏စွမ်းရည်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ employ မယ်တစ်ခုမှာရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်မှု "အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းမသုံးဘဲ masturbating သည့်အခါ (အလိုရှိသောအဖြစ်နှင့်ထှတျအထိပျ) ကလူနာတစ်ဦးကျေနပ်စိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မလား" မေးပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူမဟုတ်နိုင်ပေမယ့်အလွယ်တကူအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းနှင့်အတူဤရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်နိုင်လျှင်, ထို့နောက်မိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုက၎င်း၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုအလုပ်သမားမရှိရင်, "စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်" နှင့်မလိုလားအပ်သော psychoactive ဆေးဝါးများနှင့် (နောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်ကောင်းထိရောက်မှု) phosphodiesterase-5 inhibitors မညွှန်ကြားတဲ့နောက်ဆက်တွဲအန္တရာယ်များ၏မှားယွင်းသော diagnoses တစ်ဦးစွန့်စားမှုလည်းမရှိ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း-related စွမ်းဆောင်ရည်အခက်အခဲများ၏အခြားလက္ခဏာများ nocturnal စိုက်ထူနှင့် / သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စိုက်ထူဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤဒေသရှိအပိုဆောင်းသုတေသနမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူဆက်ဆက်ကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများ, အနိမ့် Self-လေးစားမှု, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, PTSD, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အခြားစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအတွက်မျက်နှာပြင်ရမယ်စဉ်ထို့အပြင်သူတို့ဆင်းရဲသားကိုစိတ်ကျန်းမာရေးလူမဟုတ်ရင် unexplained လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏အကြောင်းရင်းကြောင်းယူဆ၏သတိဖြစ်သင့် 40 အောက်မှာ။ လုလင်တို့သည်တွင်ဤအချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်ဆံရေး [bidirectional ဖြစ်နှင့် Co-ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်စေခြင်းငှါ26].
CSB compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ
DSM စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်
ED erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု
IIEF Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအညွှန်း
NAc နျူကလိယ accumbens
PTSD posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ
PIED ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု
VTA ventral tegmental ဧရိယာ
ဘရိုင်ယန် Y. ပန်းခြံနဲ့ Warren P. Klam လူနာကိစ္စတွင်ဒေတာစုဆောင်း; အားလုံးစာရေးဆရာများစက္ကူရေးသားခြင်းမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာအကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခကြေညာ။ ရှုထောထင်မြင်ချက်များနှင့်ရမှတ်ဖော်ပြစာရေးဆရာများ '' သူတို့ဖြစ်ကြပြီးသေချာပေါက်တရားဝင်အနေအထားသို့မဟုတ်အမေရိကန်ရေတပ်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာန၏မူဝါဒများပြန်ပါလာမည်မဟုတ်ကြဘူး။
de Boer, BJ; bot တွေဟာ, ML; Lycklama တစ် Nijeholt, AAB; မြေရိုင်းလွင်ပြင်, JPC; Pieters, HM; Verheij, ဆောင်းပါးများအတွက်သင်ျခြိုသုတေသန-ပုံ2၏ Th.JM အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်: မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စိတ်ရှည်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ အဆိုပါ Enigma လေ့လာမှု။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: http://www.nature.com/ijir/journal/v16/n4/fig_tab/3901155f2.html#figure-title (10 နိုဝင်ဘာလ 2015 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
Prins, ဂျေ .; Blanker, MH; Bohnen, Am, သောမတ်စ်, S ကို .; Bosch ရဲ့, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ JLHR ပျံ့နှံ့နေတဲ့: လူဦးရေ-based လေ့လာမှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ int ။ ဂျေသင်ျခြို။ res ။ 2002, 14, 422-432 ။ [CrossRef] [PubMed]
Laumann, EO; ပိုက်, တစ်ဦးက .; ရို, United States မှာ RC လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်း။ ဂျေအေအမ်အေ 1999, 281, 537-544 ။ [CrossRef] [PubMed]
Sarracino, C ကို .; Scott, အမေရိက KM အဆိုပါ porn: အဆိုပါ Porn ယဉ်ကျေးမှုထအဲဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ, ဘယ်မှာရှိကျနော်တို့ဒီနေရာမှာကနေ သွား. , Beacon စာနယ်ဇင်း: ဘော်စတွန် MA, အမေရိကန်, 2009 ။
Nicolosi, တစ်ဦးက .; Laumann, EO; Glasser, DB; Moreira, ED; ပိုက်, တစ်ဦးက .; Gingell, လိင်သဘောထား C. ကို Global လေ့လာမှုနှင့်အသက်အရွယ် 40 ပြီးနောက်အပြုအမူစုံစမ်းစစ်ဆေး '' Group မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေ့လာမှု။ Urology 2004, 64, 991-997 ။ [CrossRef] [PubMed]
Landripet ငါ .; Štulhofer, အေ Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated လား? ဂျေလိင်။ Med ။ 2015, 12, 1136-1139 ။ [CrossRef] [PubMed]
de Boer, BJ; bot တွေဟာ, ML; Lycklama တစ် Nijeholt, AAB; မြေရိုင်းလွင်ပြင်, JPC; Pieters, HM; Verheij, မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက် TJM Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စိတ်ရှည်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ အဆိုပါ Enigma လေ့လာမှု။ int ။ ဂျေသင်ျခြို။ res ။ 2004, 16, 358-364 ။ [CrossRef] [PubMed]
Mialon, တစ်ဦးက .; Berchtold, တစ်ဦးက .; Michaud, P. -တစ်ဦးက .; Gmel, G .; Suris, J.-C. ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ: လူပျိုတို့အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေးဟာ Off ။ Publ ။ Soc ။ မြီးကောင်ပေါက်။ Med ။ 2012, 51, 25-31 ။ [CrossRef] [PubMed]
Capogrosso, P ကို ​​.; Colicchia, M က .; Ventimiglia, E ကို .; Castagna, G .; Clementi, MC; Suardi, N ကို .; Castiglione, F ကို .; Briganti, တစ်ဦးက .; Cantiello, F ကို .; Damiano, R ကို .; et al ။ အသစ်စက်စက်ရောဂါ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလေးထဲကတစျခုမှာလူနာအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကနေလူငယ်က Man-စိုးရိမ်ဖွယ်ရုပ်ပုံ Is: အသစ်စက်စက်ရောဂါ ED နှင့်အတူလေးထဲကတစ်ခုမှာလူနာတစ်ဦးလူငယ်က Man Is ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2013, 10, 1833-1841 ။ [CrossRef] [PubMed]
O'Sullivan, LF; Brotto, LA က; Byers, ES; Majerovich ဂျေ; Wuest ဂျေအေပျံ့နှံ့နေတဲ့နှောင်းပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်မှလိင်အတွေ့အကြုံရှိအလယ်တန်းအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများဝိသေသလက္ခဏာများ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 630-641 ။ [CrossRef] [PubMed]
O'Sullivan, LF; Byers, ES; Brotto, LA က; Majerovich ဂျေ; ဖလက်ချာ, လိင်စွမ်းရည်နှင့်နှောင်းပိုင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမှအလယျပိုငျးအကြားဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအတွက်ပြဿနာများ၏ဂျေတစ်ဦးက longitudinal လေ့လာပါ။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေးဟာ Off ။ Publ ။ Soc ။ မြီးကောင်ပေါက်။ Med ။ 2016။ [CrossRef] [PubMed]
တပ်မတော်နေ့ကနျြးမာရေး Surveillance Centre (AFHSC) ။ အထီးတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းဝန်ဆောင်မှုအင်္ဂါတို့တွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အမေရိကန်တပ်မတော်နေ့, 2004-2013 ။ MSMR 2014, 21, 13-16 ။
Wilcox, SL; Redmond, S ကို .; ဟာဆန်, စစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် pm တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ: ပဏာမခန့်မှန်းချက်များနှင့်ခန့်မှန်း။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 2537-2545 ။ [CrossRef] [PubMed]
Wilcox, SL; Redmond, S ကို .; Davis က, TL အင်္ဂါပုံရိပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ငယ်ရွယ်အထီးစစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များအကြား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2015, 12, 1389-1397 ။ [CrossRef] [PubMed]
Klein, V ကို .; Jurin, T က .; Briken, P ကို ​​.; Štulhofer, အေ Erectile အလုပ်မဖြစ်, ပျင်းတာဟာနှင့် Hypersexuality နှစ်ဦးကိုဥရောပနိုင်ငံများကနေစုံတွဲအမျိုးသားများအကြား။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2015, 12, 2160-2167 ။ [CrossRef] [PubMed]
မာတင်အပြည်ပြည်သွား; Abdo, CHN Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် 18-40 နှစ်ပေါင်းအသက်ဘရာဇီးအမျိုးသားများတွင်ဆက်စပ်အချက်များ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2010, 7, 2166-2173 ။ [CrossRef] [PubMed]
Heidelbaugh, Erectile အလုပ်မဖြစ်-အမေရိကန်မိသားစုသမား၏ JJ စီမံခန့်ခွဲမှု။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: http://www.aafp.org/afp/2010/0201/p305.html (17 နိုဝင်ဘာလ 2015 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
Papagiannopoulos, D ကို .; Khare, N ကို .; Nehra, အော်ဂဲနစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလုလင်အေအကဲဖြတ်။ အာရှဂျေ Androl ။ 2015, 17, 11-16 ။ [CrossRef] [PubMed]
Flegal, KM; ကာရိုး, MD, အော့ဒန်ဝင်း, CL; Curtin, LR ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူကြီးများအကြားတွင်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, 1999-2008 ။ ဂျေအေအမ်အေ 2010, 303, 235-241 ။ [CrossRef] [PubMed]
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲ။ အဆိုပါ 2013 NSDUH ထံမှရလဒ်များ: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွေ့ရှိချက်များ၏အနှစ်ချုပ်။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUHresultsPDFWHTML2013/Web/NSDUHresults2013.htm#fig2.2 (15 နိုဝင်ဘာလ 2015 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
CDC Smoking နှင့်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှု။ လက်ရှိဆေးလိပ်ဆေးလိပ်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/tables/trends/cig_smoking/ (27 ဇူလိုင်လ 2015 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
Angst, ဂျေ .; Gamma, တစ်ဦးက .; Sellaro, R ကို .; Zhang က, H ကို .; Merikangas, ရပ်ရွာထဲတွင် atypical စိတ်ကျရောဂါ၏အတညျပွုခါနီး K. : အဇူးရစ်ဆောင်များတွင်လေ့လာမှုရလဒ်များ။ ဂျေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ disorders ။ 2002, 72, 125-138 ။ [CrossRef]
Mathew, RJ; Weinman, စိတ်ကျရောဂါအတွက် ML လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 1982, 11, 323-328 ။ [CrossRef] [PubMed]
Bancroft, ဂျေ .; Janssen, E ကို .; ခိုင်မာတဲ့, D ကို .; Carnes, L ကို .; Vukadinovic, Z ကို .; Long က, JS လိင်ကွဲယောက်ျားအတွက်ခံစားချက်နှင့်လိင်အကြားစပ်လျဉ်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2003, 32, 217-230 ။ [CrossRef] [PubMed]
Bancroft, ဂျေ .; Janssen, E ကို .; ခိုင်မာတဲ့, D ကို .; Vukadinovic, Z. လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတွေအတွက်ခံစားချက်နှင့်လိင်အကြားစပ်လျဉ်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2003, 32, 231-242 ။ [CrossRef] [PubMed]
Seidman, SN; Roose, SP စိတ်ကျရောဂါနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ Curr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုယ်စားလှယ်။ 2000, 2, 201-205 ။ [CrossRef] [PubMed]
Janssen, E ။ ; Bancroft, J. Dual-Control Model: လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတားစီးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်၏စိတ်ပညာဇီဝကမ္မဗေဒ၌၎င်း, Janssen, အီး, Ed က။ ; Indiana တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း - Bloomington, IN, USA, 2007; စစ။ 197-222 ။
အွန်လိုင်းဆရာဝန်။ တစ်ဦး Erectile အလုပ်မဖြစ် Forum ၏တစ်ဦးကဝေါဟာရရငျးမွစျအားသုံးသပ်ခြင်း။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: http://onlinedoctor.superdrug.com/semantic-analysis-erectile-dysfunction (3 သြဂုတ်လ 2016 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
Damiano, P ကို ​​.; Alessandro, B, .; Carlo, အက်ဖ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ဝက်ဘ် porn: လိင်၏ခေတ်သစ်။ int ။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ Med ။ ကျန်းမာရေး 2015, 28, 169-173 ။
Sutton, KS; Stratton, N ကို .; Pytyck, ဂျေ .; Kolla, NJ; 115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့် Cantor, JM လူနာလက်ခဏာ။ ဂျေလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2015, 41, 563-580 ။ [CrossRef] [PubMed]
Voon, V ကို .; မှဲ့, တီဘီ, BANCA, P ကို ​​.; ပေါ်တာ L ကို .; မောရစ်, L ကို .; မစ်ချယ်, S ကို .; Lapa, TR; Karr, ဂျေ .; Harrison, NA; Potenza, MN; et al ။ နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ PLoS ONE 2014, 9, e102419 ။ [CrossRef] [PubMed]
Fisch, HM သစ်အဝတ်အချည်းစည်း: လူကြီးတွေများအတွက် Ultimate လိင်ပညာပေး; Sourcebooks: Naperville, IL, အမေရိကန်, 2014 ။
Doidge သူ့ဟာသူပြောင်းလဲဒါက N. အဆိုပါဦးနှောက်: ဦးနှောက်သိပ္ပံ၏ Frontiers ကနေကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှု၏ပုံပြင်, 1st ed .; ပင်ဂွင်းစာအုပ်များ: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2007 ။
Bronner, G .; ဗင်္ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာလူပျိုတို့အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ် IZ ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့်။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 1798-1806 ။ [CrossRef] [PubMed]
Carvalheira, တစ်ဦးက .; Træen, B, .; လျော့နည်းသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ့တာရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများများထဲတွင် Stulhofer, အေတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ? ဂျေလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2015, 41, 626-635 ။ [CrossRef] [PubMed]
Daneback K ကို .; Traeen, B, .; Månsson, S.-A. နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲတစ်ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2009, 38, 746-753 ။ [CrossRef] [PubMed]
နေရောင်, C ကို .; တံတားများ, တစ်ဦးက .; Johnason, ဂျေ .; Ezzell, အမ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသားလိင် Script: An စားသုံးမှုလေ့လာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2014, 45, 1-12 ။
မော်ဂန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် '' အသုံးပြုမှုနှင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဦးစားပေး, အပြုအမူနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြား EM အစည်းအရုံးများ။ ဂျေလိင် Res ။ 2011, 48, 520-530 ။ [CrossRef] [PubMed]
Maddox, Am, Rhoades, GK; တစ်ယောက်တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွလိင်-အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်း Markman, HJ: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်အတူအသင်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2011, 40, 441-448 ။ [CrossRef] [PubMed]
တံတားများ, AJ; Morokoff, လိင်ကွဲစုံတွဲအတွက် PJ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ကျေနပ်မှု။ Pers ။ Relatsh ။ 2011, 18, 562-585 ။ [CrossRef]
Stewart က, DN; Szymanski တစ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်၏ Correlate, ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရိုမန်းတစ်အဖော်ရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု DM လူငယ်လူကြီးအမျိုးသမီးများနေ့အစီရင်ခံစာများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2012, 67, 257-271 ။ [CrossRef]
နေရောင်, C ကို .; Miezan, E ကို .; Lee က, N. -Y ကို .; ရှိန်းပြား, JW ကိုရီးယားအမျိုးသားများရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု, Extreme ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအတွက်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့် Dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး။ int ။ ဂျေလိင်။ ကျန်းမာရေး 2015, 27, 16-35 ။ [CrossRef]
Zillmann, D ကို .; Bryant, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအပေါ်ဂျေညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံရဲ့သက်ရောက်မှု။ ဂျေ Apple က။ Soc ။ Psychol ။ 2006။ [CrossRef]
Wéry, တစ်ဦးက .; Billieux, ဂျေအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။ Hum ။ ပြုမူနေ။ 2016, 56, 257-266 ။ [CrossRef]
Poulsen, fo; မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ်, DM; Galovan, Am ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: ဘယ်သူကအသုံးပြုဘယ်လိုစုံတွဲရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဂျေလိင် Res ။ 2013, 50, 72-83 ။ [CrossRef] [PubMed]
Doran K ကို .; စျေး, ဂျေညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အိမ်ထောင်ရေး။ ဂျေ Fam ။ Econ ။ ကိစ္စများ 2014, 35, 489-498 ။ [CrossRef]
ပယ်ရီ, SL ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကျော်အချိန်ကိုလျှော့ချကြည့်ရှုခြင်းပါသလား? longitudinal ဒေတာများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2016။ [CrossRef] [PubMed]
သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; Fong သည်, T က .; Prause, N. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ Socioaffective neuroscience ။ Psychol ။ 2013။ [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Martino, S ကို .; Potenza, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာအတွက်စိတ်ဝင်စားလူ MN လက်တွေ့လက်ခဏာ။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2016, 5, 169-178 ။ [CrossRef] [PubMed]
Prause, N ကို .; မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှု, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated ကိုကြည့်ရှုခြင်း Pfaus, ဂျေ။ လိင်။ Med ။ 2015, 3, 90-98 ။ [CrossRef] [PubMed]
မဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်နိုင်မှုနှင့်အတူလိင်လှုံ့ဆော်မှု Associated, မ Erectile အလုပ်မဖြစ်ကိုကြည့်ရှုခြင်း Isenberg, RA: တစ်ဦးကမှတ်ချက်။ လိင်။ Med ။ 2015, 3, 219-221 ။ [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; Pekal, ဂျေ .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အလုပ်မဖြစ်ဖြေရှင်းလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်ဘာစွဲဆုံးဖြတ်ရန်။ Cyberpsychology ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2015, 18, 575-580 ။ [CrossRef] [PubMed]
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M က .; Laier, C ကို .; Pawlikowski, M က .; Schächtle, ဦး .; Schöler, T က .; Altstötter-Gleich အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအကဲခတ်, C. : အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုလိင်က်ဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြု. များအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ ratings နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေအခန်းက္ပ။ Cyberpsychology ။ ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2011, 14, 371-377 ။ [CrossRef] [PubMed]
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M က .; Snagowski, ဂျေ .; Laier, C ကို .; Maderwald, အက်စ် Ventral striatum လှုပ်ရှားမှုပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲလက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ NeuroImage 2016, 129, 224-232 ။ [CrossRef] [PubMed]
Twohig, အမတ်, Crosby သည်, JM; ဘယ်လိုအဘယ်သူကိုကပြဿနာဖြစ်ပြီး, အဘယ်ကြောင့်: ကော့, JM ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်း, လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2009, 16, 253-266 ။ [CrossRef]
Gola, M က .; Lewczuk K ကို .; Skorko, အမ်ကဘာလဲ Matters: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုပမာဏသို့မဟုတ်အရည်အသွေး? ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူအချက်များ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2016, 13, 815-824 ။ [CrossRef] [PubMed]
Demetrovics, Z ကို .; Király, Baggio et al အပေါ် O. Commentary ။ (2016): internet / ဂိမ်းစွဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလေးလံသောအသုံးပြုမှုထက်ပိုပါတယ်။ စှဲမွဲမှု 2016, 111, 523-524 ။ [CrossRef] [PubMed]
Štulhofer, တစ်ဦးက .; Bajić, z ။ Erectile နှင့်ခရိုအေးရှားအတွက်အမျိုးသားများအကြား Ejaculatory အခက်အခဲများ၏ပျံ့နှံ့။ Croat ။ Med ။ ဂျေ 2006, 47, 114-124 ။ [PubMed]
Hald ပေါ်တွင် GM ကမှတ်ချက်: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Associated Younger လိင်ကွဲအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်အလုပ်မဖြစ်နှင့်အတူရှိပါသလား? ဂျေလိင်။ Med ။ 2015, 12, 1140-1141 ။ [CrossRef] [PubMed]
Carvalheira, တစ်ဦးက .; Traeen, B, .; ယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားŠtulhofer, အေဆက်စပ်မှု: တစ်ဦးက Cross-ယဉ်ကျေးမှုလေ့လာမှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2014, 11, 154-164 ။ [CrossRef] [PubMed]
Pfaus, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ JG Pathways ။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2009, 6, 1506-1533 ။ [CrossRef] [PubMed]
Melis, MR; Argiolas, penile စိုက်ထူ၏အေဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: oxytocin နှင့်အထီးကြွက်များတွင် dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်နှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန်၏အခန်းကဏ္ဍကို၏တစ်ဦးကပြန်လည်စစ်ကြော။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2011, 35, 939-955 ။ [CrossRef] [PubMed]
Alcaro, တစ်ဦးက .; Huber, R ကို .; အဆိုပါ Mesolimbic Dopaminergic စနစ်၏ Panksepp, ဂျေအပြုအမူ Functions များ: တစ်ဦးထိခိုက်စေ Neuroethological အမြင်။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 2007, 56, 283-321 ။ [CrossRef] [PubMed]
Volkow, ND; ဝမ်, G. အ-J ကို .; မုဆိုး, JS; Tomasi, D ကို .; Telang, အက်ဖ်စွဲ: dopamine ဆုလာဘ် circuitry အပြင်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 2011, 108, 15037-15042 ။ [CrossRef] [PubMed]
Pfaus, JG Dopamine: ကူညီပေးခြင်းအထီးကအနည်းဆုံး 200 သန်းနှစ်ပေါင်း copulate: Kleitz-နယ်လ်ဆင် et al အပေါ်သီအိုရီမှတ်ချက်။ (2010) ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2010, 124, 877-880 ။ [CrossRef] [PubMed]
Egecioglu, E ကို .; Prieto-Garcia က, L ကို .; Studer, E ကို .; Westberg, L ကို .; Jerlhag, အီးအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အချက်ပြ ghrelin ၏အခန်းကဏ္ဍ။ စှဲလမျးသူ။ Biol ။ 2014, 21, 348-359 ။ [CrossRef] [PubMed]
Arnow, BA ဘွဲ့; Desmond, je; နဖူးစည်းစာတမ်း, ll; ဂလိုဗာ, GH; ရှောလမုန်သည်, တစ်ဦးက .; Polan, ML; Lue, TF; Atlas, ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက်အနောက်တောင်ဘက်တွင်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ။ ဦးနှောက် 2002, 125, 1014-1023 ။ [CrossRef] [PubMed]
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Stief, CG ဗဟိုယန္တရားများ: တစ်ဆရာသိရန်လိုပေမည်ကဘာလဲ။ int ။ ဂျေသင်ျခြို။ res ။ 2003, 15, S3-S6 ။ [CrossRef] [PubMed]
Andersson, K.-E. erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ pharmacological ကုသမှုများအတွက် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်အခြေခံ၏ mechanisms ။ Pharmacol ။ ဗျာ 2011, 63, 811-859 ။ [CrossRef] [PubMed]
Volkow, ND; ဝမ်, G. အ-J ကို .; မုဆိုး, JS; Tomasi, D ကို .; Telang, F ကို .; Baler, R. စွဲ: sensitivity ကိုတိုးပှားမျှော်လင့် sensitivity ကိုဦးနှောက်ရဲ့ control circuit ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ပရိယာယ်ပြုမည်ဆုချယုတ်လျော့လေ၏။ BioEssays သတင်းဗျာ Mol ။ cell ။ dev ။ Biol ။ 2010, 32, 748-755 ။ [CrossRef] [PubMed]
Frascella, ဂျေ .; Potenza, MN; ဘရောင်း, ll; သစ်တစ်ခုပူးတွဲမှာစွဲထွင်းထု Childress, AR? shared ဦးနှောက်အားနည်းချက်များ Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းများအတွက်လမ်းဖွင့်လှစ်။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 2010, 1187, 294-315 ။ [CrossRef] [PubMed]
Leyton, M က .; Vezina, စှဲဖို့အားနည်းချက်အတွက် P. Dopamine အတက်အကျ: တစ်ဦးက neurodevelopmental မော်ဒယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol ။ သိပ္ပံ။ 2014, 35, 268-276 ။ [CrossRef] [PubMed]
Griffiths ကတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲအဖြစ် MD compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အဆိုပါအင်တာနက်သက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များကို။ စှဲမွဲမှု 2016။ [CrossRef] [PubMed]
ဟီလ်တန်, neuroplasticity များ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစား DL ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ-တစ်ဦးက supranormal နှိုးဆွ။ Socioaffective neuroscience ။ Psychol ။ 2013, 3, 20767 ။ [CrossRef] [PubMed]
Negash, S ကို .; Sheppard, NVN; လမ်းဘတ်, မိုင်, လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုများအတွက် Fincham, FD ထရေးဒင်းနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေးလျှော့စျေး။ ဂျေလိင် Res ။ 2015, 1-12 ။ [CrossRef] [PubMed]
ယူလနျြ, E ကို .; ခေါ်ဆောင်သွားဆွငါးခုသည် Modes ဖြတ်ပြီး R. အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထ, ကျော်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 1988, 17, 131-143 ။ [CrossRef] [PubMed]
Laan, E ကို .; Everaerd, ဆလိုက်များနှင့်ရုပ်ရှင်မှအမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ဒဗလျူလေ့။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 1995, 24, 517-541 ။ [CrossRef] [PubMed]
Koukounas, E ကို .; ကျော်, R. အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထရုပ်ရှင်ပွဲတော်နှင့်အကြောင်းအရာအတွက်ကိုက်ညီ Fantasy အားဖြင့်ရူးနှမ်း။ Aust ။ ဂျေ Psychol ။ 1997, 49, 1-5 ။ [CrossRef]
Goldey, KL; ဗန် Anders, လှုံ့ဆော်မှုအလယ်အလတ်အမျိုးသမီးများနေ့ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ရှေးခယျြ Erotica မှ testosterone တုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူ SM သတ်မှတ်ခြင်း။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2015, 77, 1-17 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kim က, SC; ဘန်, JH; ဟွန်, JS; seo, ထပ်ခါတစ်လဲလဲအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လိင်စိတ်ကြွဆေးမှ Erectile တုံ့ပြန်မှုအတွက် KK အပြောင်းအလဲများ။ အီးယူအာရ်။ Urol ။ 1998, 33, 290-292 ။ [CrossRef] [PubMed]
ယောသပ်သည် PN; Sharma က, RK; Agarwal, တစ်ဦးက .; ပိုလျင်မြန်စွာ Sirot, LK အမျိုးသားများသုက် Semen ၏ပိုကြီးသော Volumes ကိုပိုမို Motilal သုက်ပိုးနှင့် Novell အမျိုးသမီးပုံများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါ။ Evol ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ 2015, 1, 195-200 ။ [CrossRef]
Koukounas, E ကို .; အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့နှင့် dishabituation စဉ်အတွင်းအာရုံကိုအရင်းအမြစ်များ R. ခွဲဝေ, ကျော်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 1999, 28, 539-552 ။ [CrossRef] [PubMed]
Meuwissen ငါ .; ကျော်, R. လေ့နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုလိင်စိတ်နိုးထ၏ dishabituation ။ ပြုမူနေ။ res ။ Ther ။ 1990, 28, 217-226 ။ [CrossRef]
Koukounas, E ကို .; လိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့စဉ်အတွင်း eyeblink ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်၏ပြင်းအားအတွက်ကျော်, R. အပြောင်းအလဲများ။ ပြုမူနေ။ res ။ Ther ။ 2000, 38, 573-584 ။ [CrossRef]
Schomaker, ဂျေ .; Meeter, အမ်ရေတိုနှင့်ဦးနှောက်နှင့်သိမှတ်ခံစားမှုပေါ်အသစ်အဆန်း, deviance နှင့်အံ့အားသင့်စရာများကြာရှည်ခံအကျိုးဆက်များ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2015, 55, 268-279 ။ [CrossRef] [PubMed]
BANCA, P ကို ​​.; မောရစ်, LS, မစ်ချယ်, S ကို .; Harrison, NA; Potenza, MN; Voon, V. ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ ဂျေ Psychiatric ။ res ။ 2016, 72, 91-101 ။ [CrossRef] [PubMed]
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်။ အွန်လိုင်း porn အသစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက်လိင်စွဲ '' အလိုဆန္ဒအစာကျွေးလိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: http://www.cam.ac.uk/research/news/online-porn-may-feed-sex-addicts-desire-for-new-sexual-images (24 နိုဝင်ဘာလ 2015 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
Fadok, JP; Dickerson, TMK; Palmiter, RD Dopamine cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ဘို့လိုအပ်ပေသည်။ ဂျေ neuroscience ။ off ။ ဂျေ Soc ။ neuroscience ။ 2009, 29, 11089-11097 ။ [CrossRef] [PubMed]
Barlow, DH; Sakheim, DK; Beck, JG တော့ပူပန်လိင်စိတ်နိုးထတိုးပွားစေပါသည်။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1983, 92, 49-54 ။ [CrossRef] [PubMed]
Fadok, JP; Darvas, M က .; Dickerson, TMK; Palmiter, Pavlovian ကွောကျရှံ့ခွငျးအခြေအနေများ RD Long-Term မှတ်ဉာဏ်အတွက်နျူကလိယ Accumbens နှင့် Basolateral Amygdala အတွက် Dopamine လိုအပ်သည်။ PLoS ONE 2010, 5, e12751 ။ [CrossRef] [PubMed]
ဆုလာဘ်တန်ဖိုးနှင့်အန္တရာယ်အဘို့အ Schultz, ဒဗလျူ Dopamine အချက်ပြမှုများ: အခြေခံပညာနှင့်မကြာသေးမီကဒေတာ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Funct ။ BBF 2010, 6, 24 ။ [CrossRef] [PubMed]
Wittmann, ဘီစီ; Bunzeck, N ကို .; Dolan, RJ; Düzel, အသစ်အဆန်းတပ်သားသစ်ဆုလာဘ်စနစ်နှင့် hippocampus ၏အီးရှိလာစာမျက်နှာမြှင့်တင်နေစဉ်။ NeuroImage 2007, 38, 194-202 ။ [CrossRef] [PubMed]
Salamone, JD; ကော်ရဲရား, အမ် Mesolimbic Dopamine ၏နက်နဲသောအရာလှုံ့ဆော် Functions များ။ အာရုံခံဆဲလျ 2012, 76, 470-485 ။ [CrossRef] [PubMed]
Wolchik, SA; Beggs, မ; Wincze, JP; Sakheim, DK; Barlow, DH; Mavissakalian, အမ်အမျိုးသားများတွင်နောက်ဆက်တွဲလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်စိတ်ခံစားမှု arousal ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1980, 89, 595-598 ။ [CrossRef] [PubMed]
Andrzejewski, ME, McKee, BL, Baldwin, AE; ဘန်း, L ကို .; ဟာနန်ဒက်ဇ်, P. အော်ပရေတာသင်ယူမှုစဉ်အတွင်း corticostriatal ကွန်ရက်မှာ neuroplasticity ၏လက်တွေ့ဆက်စပ်မှု။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2013, 37, 2071-2080 ။ [CrossRef] [PubMed]
Hyman, အရှေ့တောင်စွဲ: သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏တစ်ဦးကရောဂါ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2005, 162, 1414-1422 ။ [CrossRef] [PubMed]
Jensen, FE; Nutt, AE အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်: ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူငယ်လူကြီးများမှတစ်ဦးအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့ Survival လမ်းညွှန်; Harper ကို: နယူးယောက်, NY, အမေရိကန်, 2015 ။
Doremus-Fitzwater, TL; Varlinskaya, EI; မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လှံ, LP သို့လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များ: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုအဘို့အဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဂယက်ရိုက်။ ဦးနှောက် Cogn ။ 2010, 72, 114-123 ။ [CrossRef] [PubMed]
Seigfried-Spellar, KC; ရော်ဂျာ, MK deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာပါသလား ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။ Hum ။ ပြုမူနေ။ 2013, 29, 1997-2003 ။ [CrossRef]
Nestler, EJ ΔFosB: ဆုကြေးများအတွက်တစ်ဦးကမော်လီကျူးပြောင်းလဲမည်။ ဂျေမူးယစ်ဆေးအရက် Res ။ 2013။ [CrossRef]
အိုး, KK, Frohmader, KS; Vialou, V ကို .; Mouzon, E ကို .; Nestler, EJ; Lehman, MN; Coolen သည်နျူကလိယ accumbens အတွက် LM DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်ဘို့အရေးကြီးသည်။ မျိုးဗီဇဦးနှောက်ပြုမူနေ။ 2010, 9, 831-840 ။ [CrossRef] [PubMed]
Frohmader, KS; Wiskerke, ဂျေ .; ပညာရှိ RA; Lehman, MN; Coolen, LM သမ်ဖက်တမင်းအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိအာရုံခံ၏ subpopulations အပေါ်ပြုမူ။ neuroscience 2010, 166, 771-784 ။ [CrossRef] [PubMed]
အိုး, KK, Vialou, V ကို .; Nestler, EJ; Laviolette, SR; Lehman, MN; Coolen, LM သဘာဝနှင့်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု Key ကိုအာမခံအဖြစ်ΔFosBနှင့်အတူဘုံဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောပလပ်စတစ်ယန္တရားများအပေါ်ဥပဒေ။ ဂျေ neuroscience ။ 2013, 33, 3434-3442 ။ [CrossRef] [PubMed]
Garavan, H ကို .; Pankiewicz, ဂျေ .; Bloom, တစ်ဦးက .; cho, JK; Sperry, L ကို .; Ross ကတီဂျေ; Salmeron, BJ; မြင့်တက်, R ကို .; ကယ်လီ, D ကို .; Stein, EA ၏ Cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာ: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် Neuroanatomical သတ်မှတ်ချက်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2000, 157, 1789-1798 ။ [CrossRef] [PubMed]
Vezina, P ကို ​​.; Leyton, အမ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများတွင်တွေကိုနှင့်လှုံ့ဆော်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအေးစက်။ Neuropharmacology 2009, 56, 160-168 ။ [CrossRef] [PubMed]
ရော်ဘင်ဆင်, TE; Berridge, KC စွဲ၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: တချို့ကလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 2008, 363, 3137-3146 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Voon, V ကို .; Potenza, MN တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော စှဲမွဲမှု 2016။ [CrossRef] [PubMed]
ကာရိုး, JS; Padilla-Walker က, LM; နယ်လ်ဆင်, LJ; Olson, CD ကို; barry, CM; Madsen, လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများထဲတွင် SD ကမျိုးဆက်ကို XXX ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလက်ခံနှင့်အသုံးပြုမှု။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ res ။ 2008, 23, 6-30 ။ [CrossRef]
Hald, GM က; Kuyper, L ကို .; အာဒံ, PCG; က de ကျေး, JBF ပွုလုပျခွငျးရှင်းပြပါကြည့်ရှုခြင်းပါသလား? လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဒတ်ခ်ျပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်လူငယ်လူကြီးများတစ်အကြီးစားနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအသင်းမှအကဲဖြတ်။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2013, 10, 2986-2995 ။ [CrossRef] [PubMed]
ဟီလ်တန်, DL "အမြင့်အလိုဆန္ဒ" သို့မဟုတ် "မျှသာ" တစ်ခုစွဲ? သံမဏိ et al မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန်။ Socioaffective neuroscience ။ Psychol ။ 2014။ [CrossRef] [PubMed]
Mechelmans, DJ သမား; Irvine, M က .; BANCA, P ကို ​​.; ပေါ်တာ L ကို .; မစ်ချယ်, S ကို .; မှဲ့, တီဘီ, Lapa, TR; Harrison, NA; Potenza, MN; Voon, နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်အကဲဆတ်တွေကိုဦးတည်အာရုံစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု Enhanced V. ။ PLoS ONE 2014, 9, e105476 ။ [CrossRef]
Bostwick, JM; Bucci, naltrexone နဲ့ကုသဂျေအင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်း။ Mayo အဘိဓါန် Clin ။ proc ။ 2008, 83, 226-230 ။ [CrossRef]
Laier, C ကို .; Pawlikowski, M က .; Pekal, ဂျေ .; Schulte, F ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်ဘာစွဲ: အတွေ့အကြုံလိင်စိတ်နိုးထညစ်ညမ်းနှင့်မစစ်မှန်သောဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်စောင့်ကြည့်သည့်အခါခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2013, 2, 100-107 ။ [CrossRef] [PubMed]
Schiebener, ဂျေ .; Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်ညစ်ညမ်းအတူ flyer ပဲရှိသေး? တစ်ဦး multitasking ကိုအခြေအနေမှာဘာတွေကိုသုံးရင်သို့မဟုတ်လစ်လျူရှုကျဘာစွဲလက္ခဏာတွေမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေပြုမူနေ။ စှဲလမျးသူ။ 2015, 4, 14-21 ။ [CrossRef] [PubMed]
Snagowski, ဂျေ .; Wegmann, E ကို .; Pekal, ဂျေ .; Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, ဘာစွဲထဲမှာအမ် Implicit အသင်းအဖွဲ့များ: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အတူတစ် Implicit အစည်းအရုံးစမ်းသပ်ခြင်း၏ adapter ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2015, 49, 7-12 ။ [CrossRef] [PubMed]
Chatzittofis, တစ်ဦးက .; Arver, S ကို .; Öberg K ကို .; Hallberg, ဂျေ .; Nordstrom, P ကို ​​.; Jokinen, hypersexual ရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ဂျေ HPA ဝင်ရိုး dysregulation ။ Psychoneuroendocrinology 2015, 63, 247-253 ။ [CrossRef] [PubMed]
Phillips က, B, .; Hajela, R ကို .; တစ်ဦးရောဂါအဖြစ် JR, DLH လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2015, 22, 167-192 ။ [CrossRef]
မတ်ေတာ, T က .; Laier, C ကို .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, M က .; Hatch က L ကို .; Hajela, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ R. အာရုံကြောသိပ္ပံ: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို။ ပြုမူနေ။ သိပ္ပံ။ 2015, 5, 388-433 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Meshberg-Cohen ကို, S ကို .; Martino, S ကို .; Quinones, LJ; Potenza, Naltrexone နှင့်အတူ compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု MN ကုသမှု: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2015, 172, 1260-1261 ။ [CrossRef] [PubMed]
seok, ဂျေ-W .; Sohn, J.-H. ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ တပ်ဦး။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2015, 9, 321 ။ [CrossRef] [PubMed]
Klucken, T က .; Wehrum-Osinsky, S ကို .; Schweckendiek, ဂျေ .; Kruse, အို .; compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် Stark, R. ALTER အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2016, 13, 627-636 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kühn, S ကို .; Gallinat, Hypersexuality ၏ဂျေ Neurobiological အခြေခံ။ Neurobiology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းခုနှစ်တွင်; ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း: အမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်, 2016 ။
ကိုကေးလာ၊ ဂျေ။ ; ကာလာ ၊S ။ ; Jääskeläinen, M ။ ; Vahlberg, T ။ ; Taiminen, T. ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အင်တာနက်နှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအသုံးပြုမှု။ အီးယူအာရ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုဂျေ Assoc ။ အီးယူအာရ်။ စိတ်ရောဂါ။ 2010, 25, 236-241 ။ [CrossRef] [PubMed]
Meerkerk, G. အ-J ကို .; ဗန် Den Eijnden, RJJM; Garretsen, HFL compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း: ဒါဟာအားလုံးလိင်အကြောင်းကိုပဲ! Cyberpsychology ။ ပြုမူနေ။ သက်ရောက်မှုကအင်တာနက် Multimed ။ virtual ရီးရဲလ်။ ပြုမူနေ။ Soc ။ 2006, 9, 95-103 ။ [CrossRef] [PubMed]
အင်တာနက်ကဂိမ်း Disorder ။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: http://www.dsm5.org/Documents/Internet Gaming Disorder Fact Sheet.pdf (3 သြဂုတ်လ 2016 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
DSM-V ကိုများအတွက် block, JJ ကိစ္စများ: အင်တာနက်စွဲ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2008, 165, 306-307 ။ [CrossRef] [PubMed]
ရှင်ဘုရင်က, DL; Delfabbro, DSM-5 များအတွက် PH ကိုကိစ္စများ: ဗီဒီယို-ဂိမ်းရောဂါ? Aust ။ NZJ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2013, 47, 20-22 ။ [CrossRef] [PubMed]
Potenza, DSM-5 များ၏အခြေအနေတွင် MN က Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2014, 39, 1-2 ။ [CrossRef] [PubMed]
Leyton, M က .; Vezina, P. Striatal အတက်အကျ: လူသားတွေအတွက်စှဲဖို့အားနည်းချက်အတွက်သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2013, 37, 1999-2014 ။ [CrossRef] [PubMed]
Prause, N ကို .; သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; Sabatinelli, D ကို .; Proudfit "porn စွဲ" နဲ့ကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ GH Modulation ။ Biol ။ Psychol ။ 2015, 109, 192-199 ။ [CrossRef] [PubMed]
Snagowski, ဂျေ .; Laier, C ကို .; Duka, T က .; ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့အမှတ်တံဆိပ်, အမ် Subject တဏှာပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီး။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2016။ [CrossRef]
Snagowski, ဂျေ .; ပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူ့ Analog နမူနာအနေဖြင့်ရလဒ်များ: အမှတ်တံဆိပ်, ဘာစွဲ၏အမ်ရောဂါလက္ခဏာများနှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရှောင်ရှားညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ တပ်ဦး။ Psychol ။ 2015, 6, 653 ။ [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; Pawlikowski, M က .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အမ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမရေရာဒွိဟအောက်မှာနှောင့်ယှက်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2014, 43, 473-482 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kühn, S ကို .; Gallinat, ဂျေဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု: porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု 2014, 71, 827-834 ။ [CrossRef] [PubMed]
Volkow, ND; ဝမ်, G. အ-J ကို .; Telang, F ကို .; မုဆိုး, JS; Logan, ဂျေ .; Childress, အေ-R ကို .; ဂြနျေး, M က .; ma, Y ကို .; သူတို့ကိုကင်းတွေကိုနှင့်အတူဒွန်တွဲနေကြသည်မဟုတ်လျှင် Wong, striatum အတွက် C. Dopamine တိုးကင်းချိုးဖောက်တဏှာထုတ်ယူကြပါဘူး။ NeuroImage 2008, 39, 1266-1273 ။ [CrossRef] [PubMed]
Ostlund, SB, LeBlanc, KH; Kosheleff, AR; Wassum, KM; Maidment, NT Phasic mesolimbic dopamine အချက်ပြထပ်ခါတလဲလဲကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပံ့ပိုးကူညီ encodes ။ Neuropsychopharmacol ။ off ။ Publ ။ နံနက်။ Coll ။ Neuropsychopharmacol ။ 2014, 39, 2441-2449 ။ [CrossRef] [PubMed]
Vanderschuren, LJMJ; ပီယပ်, RC အသိမြှမူးယစ်ဆေးစွဲမှုအတွက် process လုပ်တယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံခုနှစ်တွင်; ကိုယ်ပိုင်, DW, Gottschalk, JKS, Eds .; Springer ဘာလင် Heidelberg: ဘာလင်, ဂျာမနီ, 2010; စစ။ 179-195 ။
Nestler, EJ ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းက္ပ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 2008, 363, 3245-3255 ။ [CrossRef] [PubMed]
Schultz, dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 1998, 80, 1-27 ။ [PubMed]
လူယာ, SM; Bern, GS, ဂူတစ် passive သင်ယူမှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် PR စနစ်ယာယီခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများလူ့ striatum ကိုသက်ဝင်။ အာရုံခံဆဲလျ 2003, 38, 339-346 ။ [CrossRef]
Bayer, HM; Glimcher, PW Midbrain dopamine အာရုံခံတဲ့အရေအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှား signal ကိုဝှက်။ အာရုံခံဆဲလျ 2005, 47, 129-141 ။ [CrossRef] [PubMed]
Sunsay, C ကို .; Rebec, GV Extinction နှင့် Pavlovian ကိုက်စဉ်အတွင်းနျူကလိယ Accumbens Core အတွက် Phasic Dopamine နေရင်မြန်အောင်၏ Reinstatement ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2014, 128, 579-587 ။ [CrossRef] [PubMed]
ဟတ်, AS; Rutledge, RB; Glimcher, PW, Phillips က, အ Rat နျူကလိယ Accumbens အတွက် Pem Phasic Dopamine ဖြန့်ချိအချိုးကျနေတဲ့ဆုကြေးဘီဘာအိုမှားယွင်းနေသည် Term Encodes ။ ဂျေ neuroscience ။ 2014, 34, 698-704 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kühn, S ကို .; Gallinat, ဥပဒေရေးရာနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ-တစ်ဦးက cue-reactivity ကိုဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက် Meta-analysis သည်ကိုဖြတ်ပြီးတဏှာ၏ဂျေအဖြစ်များသည့်ဇီဝဗေဒ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2011, 33, 1318-1326 ။ [CrossRef] [PubMed]
စတိန်း, RZ; Volkow, စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ ND အလုပ်မဖြစ်: Neuroimaging တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2011, 12, 652-669 ။ [CrossRef] [PubMed]
Chase, HW; Eickhoff, SB, Laird, AR; Hogarth, မူးယစ်ဆေး stimulus ထုတ်ယူခြင်းနှင့်တဏှာ၏အယ်လ်အဆိုပါဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအခြေခံ: တစ်ခုက Activation ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခနျ့မှနျးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2011, 70, 785-793 ။ [CrossRef] [PubMed]
DiFeliceantonio, AG က; Berridge, KC "ချင်" ကိုဘယ် cue? အလယ်ပိုင်း amygdala ၏ Opioid ဆွရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံနိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံအားကောင်းနိမိတ်လက္ခဏာကို-ခြေရာခံခြင်းပြသသကဲ့သို့, ပိုမိုအားကောင်းရည်မှန်းချက်-ခြေရာခံခြင်းပြသစေသည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2012, 230, 399-408 ။ [CrossRef] [PubMed]
Littel, M က .; Euser, AS; Munafò, MR; Meta-analysis သည်: ပစ္စည်းဥစ္စာ-related တွေကိုတဖက်သတ်သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ Franken, IHA Electrophysiological ညွှန်းကိန်း။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2012, 36, 1803-1816 ။ [CrossRef] [PubMed]
Laier, C ကို .; Pekal, ဂျေ .; ကုန်အမှတ်တံဆိပ်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အမ်ဘာစွဲဆန္ဒပြည့်အယူအဆအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Cyberpsychology ပြုမူနေ။ Soc ။ Netw ။ 2014, 17, 505-511 ။ [CrossRef] [PubMed]
Rosenberg က, H ကို .; Kraus, အက်စ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အတူညစ်ညမ်းအတွက် "အသည်းအသန်ပူးတွဲမှု" ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ညစ်ညမ်းဘို့တဏှာ၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2014, 39, 1012-1017 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kenny, PJ; Voren, G .; ဂျွန်ဆင်, ညနေ Dopamine D2 receptors နှင့်စွဲလမ်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် striatopallidal ဂီယာ။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 2013, 23, 535-538 ။ [CrossRef] [PubMed]
Baik, J.-H. ဆုလာဘ်-related အပြုအမူတွေအတွက်အချက်ပြ Dopamine ။ တပ်ဦး။ အာရုံကြော Circuits 2013, 7, 152 ။ [CrossRef] [PubMed]
သံမဏိ, Ke; Prokopowicz, မိသားစုဆရာဝန်; Schweitzer, MA; Magunsuon, TH; Lidor, AO; Kuwabawa, H ကို .; Kumar က, တစ်ဦးက .; Brasic, ဂျေ .; Wong ကအလယ်ပိုင်း dopamine receptors ၏ DF ALTER မီနှင့်အစာအိမ်ရှောင်ကွင်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်။ အဝလွန်ခြင်း။ တစ်ဟုန်ထိုး။ 2010, 20, 369-374 ။ [CrossRef] [PubMed]
ပညာရှိ RA Dopamine နှင့်ဆုကြေး: ရက်နေ့တွင်အဆိုပါ Anhedonia Hypothesis 30 နှစ်ပေါင်း။ Neurotox ။ res ။ 2008, 14, 169-183 ။ [CrossRef] [PubMed]
Olsen, CM သဘာဝဆုလာဘ်, neuroplasticity နှင့် Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ Neuropharmacology 2011, 61, 1109-1122 ။ [CrossRef] [PubMed]
Stice, E ကို .; Yokum, S ကို .; Blum K ကို .; Bohon, C. အလေးချိန် Gain အာခေါင်စားနပ်ရိက္ခာမှလျှော့ Striatal တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2010, 30, 13105-13109 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kim က, SH; Baik, အက်စ်-H ကို .; ပန်းခြံ, CS; Kim က, SJ; Choi, SW; Kim က, အရှေ့တောင်အင်တာနက်စွဲနှင့်အတူလူ striatal dopamine D2 receptors လျှော့ချ။ Neuroreport 2011, 22, 407-411 ။ [CrossRef] [PubMed]
Hou, H ကို .; Jia, S ကို .; ဟူ, S ကို .; ပန်ကာ, R ကို .; နေရောင်, W .; နေရောင်, T က .; Zhang က, အိပ်ချ်အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူပြည်သူ့အတွက် Striatal Dopamine ပို့ဆောင်ရေးလျှော့ချ။ BioMed ။ res ။ int ။ 2012, 2012, e854524 ။ [CrossRef] [PubMed]
Tian, ​​M က .; Chen ကမေး .; Zhang က, Y ကို .; du, F ကို .; Hou, H ကို .; Chao, F ကို .; Zhang က, အိပ်ချ်ပေပုံရိပ်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါအတွက်ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Nucl ။ Med ။ Mol ။ imaging 2014, 41, 1388-1397 ။ [CrossRef] [PubMed]
Mouras, H ကို .; Stoléru, S ကို .; Moulier, V ကို .; Pélégrini-Issac, M က .; Rouxel, R ကို .; Grandjean, B, .; Glutron, D ကို .; တစ်ခုက fMRI လေ့လာမှု: Bittoun, ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအားဖြင့်မှန်-အာရုံခံဆဲလျစနစ်၏ဂျေ Activation သွေးဆောင်စိုက်ထူ၏ဒီဂရီခန့်မှန်းထားပါတယ်။ NeuroImage 2008, 42, 1142-1150 ။ [CrossRef] [PubMed]
နှစ်ဦးစလုံး, S ကို .; Spiering, M က .; Everaerd, W .; Laan, ဓာတ်ခွဲခန်း-သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်တုန့်ပြန်။ ဂျေလိင် Res ။ 2004, 41, 242-258 ။ [CrossRef] [PubMed]
Zillmann, D ကို .; ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ဦးစားပေးရွှေ့ပြောင်း Bryant, ဂျေ။ Community ။ res ။ 1986, 13, 560-578 ။ [CrossRef]
လျူ, Y ကို .; Aragona, BJ; လူငယ်တို့, ka; Dietz, DM; Kabbaj, M က .; Mazei-Robison, M က .; Nestler, EJ; ဝမ်, Z. နျူကလိယ dopamine တစ် monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးစဘွန်း၏စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း mediates accumbens ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 2010, 107, 1217-1222 ။ [CrossRef] [PubMed]
သီချင်း, H ကို .; Zou, Z ကို .; Kou, ဂျေ .; လျူ, Y ကို .; ယန်, L ကို .; Zilverstand, တစ်ဦးက .; d'Oleire Uquillas, F ကို .; ဦးနှောက်ထဲမှာ Zhang က, X တို့မှာမတ်ေတာသ-related အပြောင်းအလဲများကို: တစ်ဦးကငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ တပ်ဦး။ Hum ။ neuroscience ။ 2015, 9, 71 ။ [CrossRef] [PubMed]
Villablanca, JR အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦး caudate နျူကလိယရှိသနည်း Acta Neurobiol ။ Exp ။ 2010, 70, 95-105 ။
ကူးတို့, CF; Snowdon, မှန် CT; ရှင်ဘုရင်က, ဂျေ, လီဗန်, JM; Ziegler, TE; Olson, DP; Schultz-မိုက်, NJ; Tannenbaum, PL; Ludwig, R ကို .; ဝူ, Z ကို .; et al ။ non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Pathways Associated ၏ activation ။ ဂျေ Magn ။ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု။ JMRI Imaging 2004, 19, 168-175 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kraus, SW; Voon, V ကို .; Potenza, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ MN Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ။ Neuropsychopharmacology 2016, 41, 385-386 ။ [CrossRef] [PubMed]
Gola, M. ပြproblemနာရှိသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များအတွက် LPP လျှော့ချခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည် အားလုံးမော်ဒယ်ပေါ်မူတည်သည်။ (Prause, Steele, Staley, Sabatinelli, & Hajcak, 2015) အပေါ်မှတ်ချက်။ ဇီဝကမ္မ။ စိတ်ရောဂါ။ 2016။ [CrossRef]
Feil, ဂျေ .; Sheppard, D ကို .; Fitzgerald, PB; Yücel, M က .; Lubman, ကပစ; Bradshaw, JL စွဲ, compulsive မူးယစ်ဆေးရှာနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုထိန်းညှိအတွက် frontostriatal ယန္တရားများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2010, 35, 248-275 ။ [CrossRef] [PubMed]
ဘီးလင်း, D ကို .; ကိုကင်းစွဲဖို့အသစ်အဆန်းများနှင့်အားနည်းချက်မှ Deroche-Gamonet, V. တုံ့ပြန်ချက်: multi-လက်ခဏာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ အေးနွေ Harb ။ ရှုထောင့်။ Med ။ 2012။ [CrossRef] [PubMed]
Hayden, BY; Heilbronner, SR; Pearson, JM; Platt, ML အံ့အားသင့်စရာ anterior cingulate cortex အတွက်အချက်ပြမှုများ: အပြုအမူအတွက်ညှိနှိုင်းမှုကားမောင်းလက်မှတ်မထိုးဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများ၏အာရုံခံ encoding က။ ဂျေ neuroscience ။ off ။ ဂျေ Soc ။ neuroscience ။ 2011, 31, 4178-4187 ။ [CrossRef] [PubMed]
Segraves, RT ကို; Bari က M ကို .; Segraves K ကို .; Spirnak, psychogenic ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် penile tumescence အပေါ် apomorphine ၏ P. Effect ။ ဂျေ Urol ။ 1991, 145, 1174-1175 ။ [PubMed]
Montorsi, F ကို .; Perani, D ကို .; Anchisi, D ကို .; Salonia, တစ်ဦးက .; Scifo, P ကို ​​.; Rigiroli, P ကို ​​.; Deho, F ကို .; de Vito, ML; Heaton, ဂျေ .; Rigatti, P ကို ​​.; et al ။ apomorphine များ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုအောက်ပါဗီဒီယိုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation ပုံစံများ: ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုရလဒ်များ။ အီးယူအာရ်။ Urol ။ 2003, 43, 405-411 ။ [CrossRef]
Cera, N ကို .; Delli Pizzi, S ကို .; di Pierro, ED; Gambi, F ကို .; Tartaro, တစ်ဦးက .; Vicentini, C ကို .; Paradiso Galatioto, G .; Romani, GL; Ferretti, Psychogenic Erectile အလုပ်မဖြစ်အတွက် Subcortical gray matter ၏အေ Macrostructural ALTER ။ PLoS ONE 2012, 7, e39118 ။ [CrossRef] [PubMed]
ဝမ်, T က .; လျူ, B, .; ဝူ, Z. -J ကို .; ယန်, B, .; လျူ, ဂျေ-H ကို .; ဝမ်, ဂျေ-K သည် .; ဝမ်, အက်စ်-G .; ယန်, ဒဗလျူ-M .; သင်တို့က, Z.-Q. [Hypothalamus psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ] ။ Zhonghua နန် Ke Xue Natl ။ ဂျေ Androl ။ 2008, 14, 602-605 ။
Triana-Del ရီယို, R ကို .; Montero-Domínguez, F ကို .; Cibrian-Llanderal, T က .; Tecamachaltzi-Silvaran, ကို MB; Garcia က, LI; Manzo, ဂျေ .; ဟာနန်ဒက်ဇ်, ME, Coria-Avila, quinpirole ၏သက်ရောက်မှုအောက်တွင် GA လိင်တူခြင်းတွဲပြီးယောက်ျားအတွက်, ဒါပေမယ့်မရအမျိုးသမီးကြွက်တစ်အေးစက်လူမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် preference ကိုဖြစ်ပေါ်သည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2011, 99, 604-613 ။ [CrossRef] [PubMed]
Triana-Del ရီယို, R ကို .; Tecamachaltzi-Silvarán, ကို MB; Díaz-Estrada, VX; Herrera-Covarrubias, D ကို .; Corona-Morales, AA ကို; Pfaus, JG; လိင် dimorphic ဦးနှောက်အရေးပါအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: အထီးကြွက်များတွင် Coria-Avila, ဂျော်ဂျီယာအေးစက်လိင်တူချင်းမိတ်ဖက် preference ကို oxytocin နှင့် dopamine အားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2015, 283, 69-77 ။ [CrossRef] [PubMed]
Politis, M က .; ချေးငွေများ, C ကို .; ဝူ K ကို .; O'Sullivan, အက်စ်အက်စ်, Woodhead, Z ကို .; Kiferle, L ကို .; လောရင့်, အေဒီ; Lees, AJ; Piccini, ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှု-နှင့်ဆက်စပ် hypersexuality အတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှ P. ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောတုံ့ပြန်မှု။ ဦးနှောက်ဂျေ Neurol ။ 2013, 136, 400-411 ။ [CrossRef] [PubMed]
brom, M က .; နှစ်ဦးစလုံး, S ကို .; Laan, E ကို .; Everaerd, W .; Spinhoven, P. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အေးစက်, သင်ယူမှုနှင့် dopamine များ၏အခန်းကဏ္ဍ: တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုတစ်ဦးကဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2014, 38, 38-59 ။ [CrossRef] [PubMed]
Klucken, T က .; Schweckendiek, ဂျေ .; Merz, CJ; Tabbert K ကို .; Walter, B, .; Kagerer, S ကို .; Vaitl, D ကို .; conditional လိင်စိတ်နိုးထများ၏ဝယ်ယူ၏ Stark, R. ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်: အရေးပေါ်အသိအမြင်နှင့်လိင်သက်ရောက်မှု။ ဂျေလိင်။ Med ။ 2009, 6, 3071-3085 ။ [CrossRef] [PubMed]
brom, အမ်လိင်စိတ်နိုးထအတွက်မက်လုံးပေးသင်ယူမှုနှင့်သိမြင်မှုစည်းမျဉ်းများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါ: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/38523 (24 ဧပြီလ 2016 အပေါ်ဝင်ရောက်) ။
Griffee K ကို .; O'Keefe, SL; မုတ်ဆိတ်, KW; လူငယ်တို့, DH; Kommor, MJ; Linz, TD; Swindell, S ကို .; Stroebel, အက်စ်အက်စ်လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝေဖန်ကာလသင်ယူဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်: လိင်စွဲလမ်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်ကလေးမွေးမြူ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2014, 21, 114-169 ။ [CrossRef]
Hoffman ဟာ, H ကို .; Janssen, E ကို .; Turner, အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထ၏ SL, Classical အေးစက်: ကွဲပြားအသိအမြင်နှင့်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဇီဝဆက်စပ်မှုသက်ရောက်မှု။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2004, 33, 43-53 ။ [CrossRef] [PubMed]
Plaud, JJ; Martini, JR အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏တုံ့ပြန်အေးစက်။ ပြုမူနေ။ ပြုပြင်မွမ်းမံ။ 1999, 23, 254-268 ။ [CrossRef] [PubMed]
Kippin, TE; ကာဣန SW; Pfaus, လိင် JG Estrous အနံ့နှင့်ကြားနေအနံ့ယောက်ျားကြွက်များတွင်သီးခြားအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်အေးစက်။ neuroscience 2003, 117, 971-979 ။ [CrossRef]
Pfaus, JG; Kippin, TE; Centeno, အက်စ်အခြေအနေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 2001, 40, 291-321 ။ [CrossRef] [PubMed]
Pfaus, JG; နိုင်ကြောင်း, ka; Talianakis, ယောက်ျားကြွက်များတွင်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် copulatory အပြုအမူ၏အက်စ် Somatosensory အေးစက်: fetish ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 2013, 122, 1-7 ။ [CrossRef] [PubMed]
Træen, B, .; Noor, SW; Hald, GM က; Rosser, BRS; Brady, အက်စ်အက်စ်, နိုင်ကြောင်း, D ကို .; Galos, DL; မီးခိုးရောင်ဂျေ; Horvath, KJ; Iantaffi, တစ်ဦးက .; et al ။ နော်ဝေမှာရှိတဲ့လိင်တူဆက်ဆံသောလူတို့၏နမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ၏အသုံးပြုမှုကိုအကြားဆက်ဆံရေးဆန်းစစ်ပါ။ Scand ။ ဂျေ Psychol ။ 2015, 56, 290-296 ။ [CrossRef] [PubMed]
နယ်လ်ဆင်, KM; Pantalone, DW; Gamarel, Ke; Simoni, အမျိုးသားများနှင့်အတူလိင်ဖူးသူကားအဘယ်သူအမျိုးသားများ၏လိင်အမူအကျင့်အပေါ်လိင်အကဲဆတ်သောအွန်လိုင်းမီဒီယာများ၏ခံစားသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ JM တစ်ဦးကနယူးတိုင်း။ ဂျေလိင် Res ။ 2015, 1-13 ။ [CrossRef] [PubMed]
Hoffman ဟာ, H ကို .; Goodrich, D ကို .; Wilson က M ကို .; Janssen, အီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်နျ Classical ကိုက်၏အခန်းက္ပ: တစ်ဦးကရှေ့ပြေးလေ့လာပါ။ လိင်။ စှဲလမျးသူ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော 2014, 21, 75-91 ။ [CrossRef]
Pfaus, JG; Kippin, TE; Coria-Avila, ဂျော်ဂျီယာ, Gelez, H ကို .; Afonso, VM က; အစ္စမေးလ်, N ကို .; Parada, အမ်ဘယ်သူဘာဘယ်မှာအခါ (နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်အဘယ်ကြောင့်)? ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်၏အတွေ့အကြုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, preference ကိုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆက်သွယ်။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 2012, 41, 31-62 ။ [CrossRef] [PubMed]
©စာရေးသူအားဖြင့် 2016; လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူ MDPI, ဘေဆယ်, ဆွစ်ဇာလန်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အဆိုပါကို Creative Commons Attribution (CC-BY) လိုင်စင် (၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအောက်တွင်ဖြန့်ဝေကာပွင့်လင်း access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).